ကြွက်များ၏လှေကားထစ်များကိုကိုကိန်းတန်ဖိုးနိမ့်ကျခြင်း - စွဲလမ်းမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်သည့်အထောက်အထား (၂၀၁၀) - သင့် ဦး နှောက်သည်ဆန့်ကျင်နေသည်
ကိုကင်းသည်အထိ၏တန်ဖိုး Ladder အပေါ်အနိမျ့ Is: စွဲ (2010) ကိုခံနိုင်ရည်အဘို့အဖြစ်နိုင်ပါ့မလားအထောက်အထား
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2010;5(7): e11592 ။
2010 ဇူလိုင် 28 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0011592
Lauriane Cantin,# ¤a Magalie Lenoir,# ¤b အဲရစ် Augier,# Nathalie Vanhille,# စာရာသည် Dubreucq,¤c Fuschia Serre,¤d ကယ်ရိုလိုင်း Vouillacနှင့် Serge အိပ်ချ် Ahmed က*
Kenji Hashimoto, Editor ကို
ကိုကင်းများ၏ဆွေမျိုးတန်ဖိုးကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်မည်သို့နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အတူပြောင်းလဲစွဲသုတေသနအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်ရည်မှန်းချက်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အံ့သြစရာကြွက်များတွင်မကြာသေးမီကစမ်းသပ်ချက် - ဝေးနေဖြင့်ဤမြေကွက်၌အများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ် - ကင်း၏တန်ဖိုးသည်ယခင်ကယူဆထက်နိမ့်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဤတွင်ကျွန်တော်ပိုကောင်းကြွက်၏တန်ဖိုးလှေကား (ကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ်၏ဆိုလိုသည်မှာ preference ကိုရာထူး-သာသနာကို) အပေါ်ကိုကင်းများ၏ဆွေမျိုးအနေအထားသတ်မှတ်ကြောင်းရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုစီးရီးသတင်းပို့ပါ။ ကြွက်များကိုကင်းတာသို့မဟုတ် saccharin နှင့်အတူဒူသောက်ရေဖြစ်စေရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည် - ဇီဝမရှိမဖြစ်မဟုတ်သော nondrug အခြားရွေးချယ်စရာ။ စနစ်တကျချိုမြိန်ရေ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအမျိုးမျိုးအားဖြင့်, ကျနော်တို့ကိုကင်းချိုမြိန်ရေနိမ့်ဆုံးပြင်းအားအနီးကြွက်များ၏ကြီးမားသောအများစု၏တန်ဖိုးလှေကားပေါ်တွင်အနိမ့်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်လွန်ခဲ့သော5နှစ်အတွင်းအားလုံးစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုနောက်ကြောင်းပြန်ဆန်းစစ်အတိတ်ကင်းအသုံးပြုမှုကိုဘယ်လောက်လေးလံနေပါစေအများဆုံးကြွက်များအလွယ်တကူ nondrug အခြားရွေးချယ်စရာ၏မျက်နှာသာအတွက်ကင်းအသုံးပြုမှုကိုအရှုံးမပေးကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ တစ်ခုသာလူနည်းစု, အတိတ်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုအပြင်းထန်ဆုံးအဆင့်မှာ 15% ထက်နည်းပါးလာ, ကိုကင်းယူဆက်လက်အချိန်မှာတောင်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းနှင့်ကယ်လိုရီသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်သက်သာရာနိုင်ကြောင်းသဘာဝသကြားဓာတ်ပူဇော်ကြ၏။
ကောက်ချက် / သိသိသာသာ
ရလဒ်တွေကိုဒီပုံစံ (အများဆုံးကြွက်များတွင်ကင်း abstinence; အနည်းငယ်ကြွက်များတွင်ကင်း preference ကို) လူ့ကိုကင်းစွဲ၏ရောဂါပေါ်သို့ကောင်းစွာမြေပုံများနှင့်ကြီးမားသောအများစုကျယ်ပြန့်မူးယစ်ဆေးရှိနေသော်လည်းဒဏ်ခံပါလိမ့်မယ်နေစဉ်ကြွက်သာလူနည်းစုကိုကင်းစွဲမှအားနည်းချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အကြံပြုထားသည် အသုံးပြုပါ။ မူးယစ်ဆေးစွဲဖို့ခံနိုင်ရည်ကြောင့်လူ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအတွက်မူးယစ်ဆေး Self-ထိတွေ့မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ရရှိနိုင်မှုအတွက်ကွဲပြားမှုများအတွက်ယခင်ကထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲသည်အများအားဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကြာမြင့်စွာသောလူသားမြားအတွက်သံသယရှိသူထားပြီးပေမယ့်မြဲမြံစွာတည်လို့မရပါ။ ဒါကနိဂုံးချုပ်ကင်းစွဲ၏ neurobiology အပေါ် preclinical သုတေသနနှင့်အနာဂတ်ဆေးဝါးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ကိုကင်းများ၏ချက်ချင်းဆုလာဘ်တန်ဖိုးကလျှင်မြန်စွာ, ဆေးလိပ်သောက်သို့မဟုတ်သွေးကြောသွင်းဆေးထိုးပြီးနောက်ဦးနှောက်မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်ကျယ်ပြန့်အများဆုံးကသဘာဝသို့မဟုတ်လူမှုရေးအရ-တန်ဖိုးထားဆုလာဘ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားစေခြင်းငှါထင်နေသည်အထူးသဖြင့်ပါလျှင် - ၎င်း၏စွဲလမ်းအလားအလာရှင်းပြဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့တစ်ဦးခြားနားချက် -။ ဒါကယူဆချက်အကြီးအကျယ်ရရှိနိုင်မျှအမူအကျင့်ကအခြားရွေးချယ်စရာတွေနဲ့ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးထားသောလက်ရှိသို့မဟုတ်ဟောင်းကိုကင်းစွဲထံမှသို့မဟုတ်စမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များအနေဖြင့်သက်သေအထောက်အထားများအပေါ်နောက်ကြောင်းပြန် Self-အစီရင်ခံစာများအပေါ်အခြေခံသည်။ ဒါဟာ nondrug ဆုလာဘ်များက evoked ကြောင်းနှိုင်းယှဉ်, ကိုကင်းသညျ့မွငျ့မားသော ventral striatum အတွက် dopamine တစ်ဦးမြင့်တက်ပြောခြင်းငှါနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့ခြင်းမှ habituate တော်မမူကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း neurobiological သုတေသနအသုံးပြုပုံသော်လည်းပိုပြီးသွယ်ဝိုက်, corroborated ခံရဖို့လည်းဖြစ်ပုံရသည် , , ။ သို့သော်လက်ရှိသို့မဟုတ်ဟောင်းကိုကင်းချိုးဖောက်ကင်း၏ဆွေမျိုးတန်ဖိုးကိုခန့်မှန်း - non-ကိုယ်စားလှယ်လူနည်းစုပိုင်သောသူ - တစ်ရွေးချယ်ရေးဘက်လိုက်မှုမှကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အခြား, မရွေးရသေးလူဦးရေ၏အများစုမှယေဘူယျသည့်အခါပိုမိုမှန်းဆဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန်, အရှင်ဖွယ်ရှိသည်။ ကိုကင်းတချို့အားနည်းချက်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကနဦးမြင့်မားကြိုးဖြစ်နိုင်သည်ကိုသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ -; ဒီကအခြားမရွေးရသေးတစ်ဦးချင်းစီ၏ကြီးမားသောအများစုအတွက်မှန်သည်ဖြစ်စေသရုပ်ပြခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲ -။ အဘယ်သူမျှမကအခြားအဖိုးတန်ရွေးချယ်မှုမရရှိနိုင်သောအခါအလားတူပင်ကြောင်းအများဆုံးစမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များအလွယ်တကူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းခြင်းမရှိသံသယရှိသော်လည်း, သူ့ဟာသူ၌ဤသက်သေအထောက်အထားနဲ့အခြား nondrug ဆုလာဘ်၏နှိုင်းယှဉ်င်း၏ဆွေမျိုးတနျဖိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေးမထားဘူး။ 1968 အတွက် Pickens နှင့် Thompson ကအားဖြင့်ဟောပြောမှုတွေအလုပ်ကတည်းကတကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ် , နှိုင်းယှဉ်နည်းနည်းသုတေသန (nondrug ဆုလာဘ်မှနှိုင်းယှဉ်လျှင်, ဆိုလိုသည်မှာ) အရေအတွက်မှစမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်ကိုကင်းများ၏ဆွေမျိုးတန်ဖိုးကိုကောက်ယူထားပြီး , .
(မရွေးရသေး) ကြွက်များတွင်မကြာသေးမှီကသုတေသန - ဝေးနေဖြင့်စမ်းသပ်စွဲသုတေသနအတွက်အများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်  - ကိုကင်းများ၏ဆွေမျိုးတန်ဖိုးကိုအရင်တုန်းကထင်ထက်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဆီးအတားမရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် -။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအမူအကျင့်, စီးပွားရေးချဉ်းကပ် အသုံးပြု. ကြောင့်မကြာသေးမီကအစားအစာ၏အကျိုးကိုတန်ဖိုးကိုသွေးကြောသွင်းကင်း၏အကျိုးကိုတန်ဖိုးကိုထက်အကြီးအကျယ် သာ. ကြီးမြတ်ကြောင်းကိုကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကွဲထံမှဆာလောင်မွတ်သိပ်ကြွက်များတွင်ခန့်မှန်းခဲ့သည် , ပင်ရေရှည်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါဆက်ရှိနေတဲ့ခြားနားချက် ။ အစားအစာကိုရှင်သန်ရပ်တည်ရေး, ကြီးထွားမှုနှင့်မျိုးပွားမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား, ဒီရလဒ်ကိုအံ့သြစရာဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပိုပြီးအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကျနော်တို့ကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်-သီးသန့်ရွေးချယ်မှုပူဇော်သောအခါ, အရှိဆုံး Non-ဆုံးရှုံးကြွက်များအလွယ်တကူ non-ကယ်လိုရီဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ် (ဆိုလိုသည်မှာ saccharin) နဲ့ဒူရေသောက်ကင်းအသုံးပြုမှုကိုအရှုံးမပေးတွေ့ရှိခဲ့  - တစ်ဦးမဟုတ်ရင်ဇီဝ inessential ကြိုးအပြုအမူ။ ဤသည်လေ့လာရေးအခြားရွေးချယ်စရာ Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုမှရယူကြောင်းယခင်သုတေသနများနှင့်အတူယေဘုယျအားတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်နှစ်ဦးစလုံးကြွက်, မျောက်နှင့်လူသားတွေအတွက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုလျော့ချနိုင်ပါတယ် -။ ချိုမြိန်ရေ preference နှုန်း se ရေငတ်သို့မဟုတ်အရက်သောက်အပြုအမူဖို့တွေကပေါ်ကနေမဟုတ်ခဲ့နှင့်ကြံ့ခိုင်ကင်းာင်းအလုပျသကိုကင်းဆွနှင့်သက်သေအထောက်အထားပေမယ့်လည်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်  - ဦးနှောက်အချိုမှုများနှင့် dopamine synapses အတွက်ဇွဲကိုပြောင်းလဲဆက်နွယ်နေတဲ့ရေတွင်း-မှတ်တမ်းတင်အပြုအမူပြောင်းလဲမှု ။ သို့တိုင် ပို. ပင်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အများစုကြွက်လျှင်မြန်စွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုတိုးချဲ့ကာလအပြီးတွင် nondrug အခြားရွေးချယ်စရာ၏မျက်နှာသာအတွက်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းမှရှောင်ကြဉ် ။ ယခင်သုတေသနကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုအောက်ပါ, ကြွက်များကိုကင်းသူတို့၏စားသုံးမှုမြင့်လာဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းပြသ , ပိုခက်လုပ်ကိုင်ဖို့  နှင့်ရှာအံ့သောငှါနှင့် / သို့မဟုတ်ကင်းရရှိရန်ပိုမိုအန္တရာယ်ယူ ။ မျိုးသုဉ်းပြီးနောက်ရှာကြံကင်းပြန်လည်ဖို့ကိုကင်းများအပြင်, စွမ်းရည် - သိသိသာသာ relapse သို့မဟုတ်တဏှာ၏မော်ဒယ်အဖြစ်အတိတ် 10 နှစ်ကျော်လေ့လာခဲ့ထားပြီးတဲ့အမူအကျင့်ဖြစ်ရပ်ဆန်း - - လည်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးရှည်လျားသောကာလကိုအောက်ပါတိုးပွါး -။ ရှင်းနေသည်မှာဤအရာအလုံးစုံအပြုအမူအပြောင်းအလဲများနှင့်အခြားသူများ  တိုးချဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအောက်ပါကင်း၏အားဖြည့်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်မက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုတစ်တသမတ်တည်းတိုးအပ်နှံ; သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှမကိစ္စမူးယစ်ဆေးတန်ဖိုးကို၌ဤတိုးလာသည်မည်မျှကြီးမားပါကပုံ nondrug အခြားရွေးချယ်စရာအဘို့အ preference ကို override နှင့်ကြွက်များအတွင်းကိုကင်း preference ကိုမြှင့်တင်လုံလောက်မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ဖွဲ့လုံးနှင့်အမျှဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုကင်းအသုံးပြုမှုကြွက်များ၏ကြီးမားသောအများစုအတွက်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်နိမ့်ဆွေမျိုးတန်ဖိုးကိုရှိကြောင်းပြသနေပါသည်။ စမ်းသပ်ချက်များပစ္စုပ္ပန်စီးရီး၏ရည်မှန်းချက်သည်ဤကောက်ချက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အထွေထွေစမ်းသပ်ဖို့နှင့်ပိုပြီးတိကျစွာကြွက်၏တန်ဖိုးလှေကား (ကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ်၏ဆိုလိုသည်မှာ preference ကိုရာထူး-သာသနာကို) အပေါ်ကိုကင်းများ၏အနေအထားသတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်တယ် , ။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဆုလာဘ်အကဲဖြတ်နည်းလမ်း၏သူတို့နှင့်အတူရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကနေရလဒ်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ရှာသောအခါ - ထိုတိုးတက်သောအချိုး (PR စနစ်) အချိန်ဇယား ။ အဆိုပါ PR စနစ်အချိန်ဇယားကိုစမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်မူးယစ်ဆေးများနှင့် nondrug ဆုလာဘ်နှစ်ဦးစလုံး၏အကျိုးကိုတန်ဖိုးကိုတိုင်းတာရန်အများဆုံးမကြာခဏအသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် , ။ အဆိုပါ PR စနစ်အချိန်ဇယားများတွင်ကြွက်များပေးထားသောဆုလာဘ် (ဆိုလိုသည်မှာယင်း breakpoints အား) မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရန်လုပ်ဖို့ကိုလက်မခံကြောင်းအလုပ်အများဆုံးပမာဏ, ယင်း၏တန်ဖိုးထားတဲ့အညွှန်းကိန်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အလိုလိုတပါးကြွက်သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးဆုလာဘ် (ဆိုလိုသည်မှာ, ချိုမြိန်ရေ) မှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ကပိုအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ရှေးခယျြမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသုံးပြီးကျနော်တို့အတိအကျကိုကင်းနှင့်အချိုမြိန်ရေအကြားဆုလာဘ်တန်ဖိုးခြားနားချက်၏အရွယ်အစားတွက်ချက်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ဒီအဆုံးအောင်မြင်ရန်ကျနော်တို့ချိုမြိန်ရေ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုညှိသောအားဖြင့်2ဆုလာဘ်များအကြားလျစ်လျူ (သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တန်းတူရေး) ၏အမှတ်တိုင်းတာ , ။ ငါတို့သည်လည်းသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းကြွက်စမ်းသပ်နေဖြင့်ဆုလာဘ်အသီးအသီးအမျိုးအစား၏အခြေအနေမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုခန့်မှန်း ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ preference ကိုအပေါ်အတိတ်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း၏ပြင်းထန်မှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကဲဖြတ်ရန်အတိတ်5နှစ်အတွင်းဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာကောက်ယူအားလုံးရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုနောက်ကြောင်းပြန်ဆန်းစစ်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ယေဘုယျအားကျွန်တော်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်မှုအောင်၏အခွင့်အလမ်းကိုပူဇော်သောအခါအတိတ်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအများစုကြွက်တန်ဖိုးကိုကင်းညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့်အလွယ်တကူကင်းအသုံးပြုမှုကိုကြဉ်ရှောင်ခဲ့ပုံမိုးသည်းထန်စွာကြောင်းနေပါစေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကြွက်ကသာလူနည်းစု, အတိတ်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုပြင်းထန်မှု၏အမြင့်ဆုံးဒီဂရီမှာ 15% ထက်နည်းပါးလာသည်, အခြားရွေးချယ်စရာ nondrug ဆုလာဘ်ကျော်ကိုကင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်လျှင်ပင်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းနှင့်ကယ်လိုရီသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်သက်သာရာနိုင်ကြောင်းသဘာဝသကြားဓာတ် (ဆိုလိုသည်မှာ, sucrose) ပူဇော်ကြ၏။ မြင့်မားသောလောင်းကြေး၏မျက်နှာကိုအတွက်ကင်း preference ကို၏ဇွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်စွဲလမ်းတစ်ပြည်နယ်အကြံပြုထားသည်။
2 လွတ်လပ်သောအလိုက်ထံမှနှစ်ဆယ်ကိုးကြွက်ကပထမဦးစွာ fixed-အချိုး 0.2 (FR) အချိန်ဇယားအောက်တွင် Self-စီမံခန့်ခွဲ saccharin နှင့်အတူဒူရေ (0.25%) သို့မဟုတ်သွေးကြောသွင်းကင်း (1 မီလီဂရမ်) ဖြစ်စေဖို့လီဗာစာနယ်ဇင်းမှအခြားနေ့စဉ်အစည်းအဝေးများအပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြ (ဆိုလိုသည်မှာ တဦးတည်းဆုလာဘ်အတွက်တဦးတည်းတုံ့ပြန်မှုရလာဒ်များ) (ကိုတွေ့မြင် ပုံ 1 နှင့် ကုန်ကြမ်းနှင့်နည်းစနစ်များ) ။ FR စွမ်းဆောင်ရည်ဝယ်ယူနှင့်တည်ငြိမ်ပြီးနောက်သူတို့ချိုမြိန်ရေသို့မဟုတ်ကင်းကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စေ၏တိုးတက်သော-အချိုး3(PR စနစ်) အချိန်ဇယား (ဆိုလိုသည်မှာတုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက်တစ်ခုချင်းစီအဆက်ဆက်သည်ဆုလာဘ်ပြီးနောက်3၏စဉ်ဆက်မပြတ်ခြေလှမ်းအတွက်အတွင်း-session ကိုတိုးပွါး) အရတနည်းစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည် (ကြည့်ရှုဆုလာဘ်အသီးအသီးအမျိုးအစားများ၏ breakpoints အားတိုင်းတာရန်အုပ်ချုပ်ရေး ပုံ 1 နှင့် ကုန်ကြမ်းနှင့်နည်းစနစ်များ) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ PR စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်၏တည်ငြိမ်ပြီးနောက်တူညီတဲ့ကြွက် (ကိုတွေ့မြင်တစ်ဦးချင်းဦးစားပေးအကဲဖြတ်ရန်ဖို့ discrete-စမ်းသပ်မှုတွေရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည် ပုံ 1 နှင့် ကုန်ကြမ်းနှင့်နည်းစနစ်များ) ။ အဆိုပါ FR အချိန်ဇယားများတွင်အများဆုံးကြွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ 30-ဇ session တစ်ခုနှုန်း3ဖို့ကန့်သတ်ခဲ့သည့်ဆုလာဘ်အများဆုံးရရှိနိုင်အရေအတွက်ကို။ အဆိုပါ PR စနစ်အချိန်ဇယားများတွင်ကြွက်များ [ချိုမြိန်ရေသည်ထက်ကင်းပိုမိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုန့်ပြန်F(1, 28) = 7.62, P<0.01; ပုံ 2A] ။ ရလဒ်အနေနဲ့သူတို့ [ချိုမြိန်ဆုလာဘ်ထက်ပိုကင်းဆေးများရရှိခဲ့F(1, 28) = 11.38, P<0.01; ပုံ 2B] နှင့်ကင်း၏ breakpoints အား [ချိုမြိန်ရေ breakpoints အားထက်နှစ်ကြိမ်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့F(1, 28) = 11.4, P<0.01; ပုံ 2C] ။ ပထမတစ်ချက်မှာဤတွေ့ရှိချက်ကိုကင်းသည့်အခြားရွေးချယ်စရာ nondrug ဆုလာဘ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားတန်ဖိုးကိုရှိကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ နှစ်ခုဆုလာဘ်များအကြားအပြန်အလှန်-သီးသန့်ရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အခါသို့သော်အဆိုပါ PR စနစ်အချိန်ဇယားထဲမှာချိုမြိန်ရေသည်ထက်ကင်းဘို့ခက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သောတူညီကြွက်ရှင်းလင်းစွာနေ့က 1 ထံမှ6မှ [ဟောင်းကျော်အဆုံးစွန်သောနှစ်သက်: t(၂၈)> ၂.၆၉၊ P<0.01; ပုံ 3A] ။ ချိုမြိန်ရေများအတွက်ဦးစားပေး [ရွေးချယ်မှု၏ပထမနေ့၌ထင်ရှားခဲ့အဲဒီနောက်တိုးလာF(5, 140) = 2.54, P<0.05] ။
ကိုကင်းနှင့်အ saccharin များအတွက်တုံ့ပြန် differential PR စနစ်။
နောက်ထပ်ဆုလာဘ်အကဲဖြတ်လုပျထုံးလုပျနညျးအကြားကဒီသိသာဆန့်ကျင်၏မူလအစစူးစမ်းဖို့ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းအဘို့အနောကျပိုငျးတှငျထို PR စနစ်ရမှတ်ကိုခေါ် saccharin နှင့်ကိုကင်းနှင့်အတူဒူရေ, အကြား breakpoints အားအတွင်းကွာခြားချက်တွက်ချက်။ positive PR စနစ်ရမှတ်များကြွက်များကိုကင်းနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာ PR စနစ်ရမှတ်ထက်ချိုမြိန်ရေအတှကျပိုပွီးအလုပျလုပျခဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ညွှန်ပြကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကျနော်တို့ပြီးတော့ဒေတာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်ကြည့်ရှုခြင်း (discrete-စမ်းသပ်မှုတွေရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအောက်တွင်တိုင်းတာအဖြစ်, တစ်ဦးချင်းစီ preference ကိုရမှတ်များနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ PR စနစ်ရမှတ်ကြံစည် ကုန်ကြမ်းနှင့်နည်းစနစ်များ) နှင့်အားဖြင့်2quadrant defining,0မှာဗဟိုပြု4လျစ်လျူလိုင်းများနှင့်အတူဂရပ်ရရှိသော (ပုံ 3B) ။ အလျားလိုက်လျစ်လျူမျဉ်းအောက်ရမှတ်ချိုမြိန်ရေကူးကင်းကြိုက်တတ်တဲ့ကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီကြွက် (; 5% 29 စုစုပေါင်းထဲကဆိုလိုသည်မှာ 17.2) ညွှန်ပြ; ဒေါင်လိုက်လိုင်း၏လက်ဝဲဘက်အပေါ်ရမှတ်ချိုမြိန်ရေသည်ထက်ကင်းပိုမိုအလုပ်လုပ်သောကြွက် (ဆိုလိုသည်မှာ 65.5%) ဖော်ပြသည်။ ရှင်းနေသည်မှာတစ်ဦးချင်းစီ (65.5%; ပွင့်လင်းစက်ဝိုင်း) ၏အများစုဆုလာဘ်အကဲဖြတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဖြတ်ပြီးအပြုအမူ incongruent ခဲ့ကြသည်: သူတို့က PR စနစ်အချိန်ဇယားထဲမှာချိုမြိန်ရေသည်ထက်ကင်းဘို့ (ညီတူညီမျှသို့မဟုတ်ခန့်) ကိုပိုပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်ရှေးခယျြမှုကာလအတွင်းယခင်ကျော်အဆုံးစွန်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီကသာလူနည်းစု (34.5%; စက်ဝိုင်းပိတ်သိမ်း) အပြုအမူအရတော့ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်အရည်အသွေးဆန်းစစ် [PR စနစ်ရမှတ် preference ကိုရမှတ်၏အလွန်ဆင်းရဲသောသိသာသော်လည်း, ခန့်မှန်းခဲ့ဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦး linear ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကအတည်ပြုခဲ့သည်R2 = 0.15, F(1, 27) = 4.82, P<0.05] ။
အဆိုပါ PR စနစ်ဇယားနှင့်ရှေးခယျြမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကြားရလဒ်များအတွက်ဆန့်ကျင်သောဤနှစ်ခုဆုလာဘ်အကဲဖြတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလုံးဝအတူတူပါပဲတိုင်းတာကြဘူးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ယခင်သုတေသန PR စနစ်အချိန်ဇယားအောက်တွင်ကင်းများအတွက်တုံ့ပြန်မသာကင်း၏တန်ဖိုးဒါပေမယ့်လည်းအလုပ် output ကိုသို့မဟုတ်အားထုတ်မှုထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ကိုကင်းစုဆောင်းခြင်း၏တိုက်ရိုက်လှုံ့ဆော်အကျိုးသက်ရောက်မှုရောင်ပြန်ဟပ်မယ်လို့အကြံပြု -။ ဒါကအဆုံးစွန်သော, တန်ဖိုးလွတ်လပ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုဟာ PR စနစ်အချိန်ဇယားထဲမှာကိုကင်းများ၏စစ်မှန်သောတန်ဖိုးကိုတစ်စနစ်တကျပိုမိုမှန်းဆဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသင့်ပါတယ်။ ကိုကင်းစုဆောင်းခြင်း 10-မိကြားကာလနှင့်အတူစမ်းသပ်မှုတွေခြားနေဖြင့်ရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်တားဆီးကြောင်းမှတ်ချက် (ကိုတွေ့မြင် ကုန်ကြမ်းနှင့်နည်းစနစ်များ) ။ ဆယ်မိနစ်ကြောင့်ကိုကင်းများ၏စီစဉ်ထားထိုး၏လှုံ့ဆော်အကျိုးသက်ရောက်မှုများလွန်ကျူးဘို့ကြာသောအချိန်ဖြစ်ပါသည် ။ 23 မိ၏တစ်ဦး fixed နှောင့်နှေးဦးချင်းစီအဆက်ဆက်သည်ဆုလာဘ်အောက်ပါထည့်သွင်းခဲ့သည်: ယခင်စမ်းသပ်မှုမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဤယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့,2သီးခြားအလိုက်ထံမှ 10 နောက်ထပ်ကြွက်အောက်ပါအတိုင်း PR စနစ်အချိန်ဇယားကိုပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ မှလွဲ. တူညီလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို Post-ဆုလာဘ်နှောင့်နှေးအတွင်းရရှိနိုင်လီဗာသုဉ်းရှောင်ရှားရန်ပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ အလှနျအဘယ်သူမျှမနှောင့်နှေးနှင့်အတူယခင်စမ်းသပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ကင်းများအတွက်တုံ့ပြန်လျော့နည်းသွားပေမယ့်ရေအဘို့အ saccharin နှင့်အတူဒူမ Post-ဆုလာဘ်နှောင့်နှေးထည့်သွင်းခြင်း [ဆုကြေး၏နှောင့်နှေး X ကိုအမျိုးအစား: F(1, 50) = 5.84, P<0.05; ပုံ 4A] ။ ရလဒ်အဖြစ်ကိုကင်းများ၏ breakpoints အားဆုကြေး၏စဉ်ဆက်မပြတ် [နှောင့်နှေး X ကိုအမျိုးအစားကနျြရထားတဲ့ချိုမြိန်ရေ breakpoints အားနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးအဆင့်အထိလျော့နည်းသွား: F(1, 50) = 8.85, P<0.01; ပုံ 4B] ။ ဤသည်ရလဒ်ကိုယခုနှစ်ခုဆုလာဘ်တန်းတူတန်ဖိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အကြံပြုထားသည်။ သို့သော်တစ်ကြိမ်ထပ်တူညီတဲ့ကြွက်ကင်းသို့မဟုတ်ချိုမြိန်ရေဖြစ်စေရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည်အခါ, သူတို့တစ်နေ့တာ 1 ထံမှ6မှ [ချိုမြိန်ရေချက်ချင်းနှင့်ခိုင်ခံ့သော preference ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆို, preference ကိုရမှတ်များသိသိသာသာလျစ်လျူလိုင်းအထက်တွင်ရှိသည် ဖြစ်. , t(22)> 4.42, P<0.01] ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပထမစမ်းသပ်မှုနှစ်ခုကမမျှော်လင့်ဘဲဖော်ပြသည့်ရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် PR ၏အချိန်ဇယားများထက်ကိုကင်း၏နှိုင်းယှဉ်တန်ဖိုးကိုအကဲဖြတ်ရန်ပိုမိုထိခိုက်လွယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်းဖော်ပြသည်။
ကိုကင်းများအတွက်တုံ့ပြန် PR စနစ်အပေါ် Post-ဆုလာဘ်နှောင့်နှေး၏ဆိုးကျိုးများ။
အဓိပ်ပါယျက၎င်း၏ဆွေမျိုးတနျဖိုး၏အကဲဖြတ်အပေါ်ကိုကင်းစုဆောင်းခြင်း၏သဖွငျ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့, saccharin နှင့်အတူဒူကိုကင်းနှင့်ရေများအတွက်တုံ့ပြန်အတွက်ခြားနားချက် (ကြွက်များ၏သီးခြားအုပ်စုတွင်မျိုးသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းတိုင်းတာခဲ့သည်n = 12) ။ ဤကြွက်များသည်ယခင်က ၆ လ ၅၉ ကြာကာလအတွင်းကိုကင်းနှင့် saccharin ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၏ FR အစီအစဉ်များကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၄ င်းနောက်တွင်ကိုကင်းနှင့် saccharin ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှု၏နေ့စဉ် PR စနစ်များ ၄၀ ဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်ရွေးချယ်မှု ၅၂ ခုနှင့်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၎င်းတို့သည် ၃၂၄.၂ - ၁၃.၆ မီလီဂရမ်နှင့်အကြမ်းအားဖြင့် ၉၂၆ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်နှင့်ကိုက်ညီသောကိုကင်းအား ၁၂၉၆.၇ ± ၅၄.၄ သွေးကြောသွင်းဆေးများကိုကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ မျိုးသုဉ်းစမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းကြွက်များသည်ကိုကင်းဓာတ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်လီဗာနှင့် saccharin နှင့်ချိုမြိန်သောရေနှင့်ဆက်စပ်သောလီဗာကို ၄၅ မိနစ်တစ်ပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခဲ့သော်လည်းလီဗာတခုခုအပေါ်တုံ့ပြန်မှုသည်အစီအစဉ်မရှိပါ။ ထို့ကြောင့်မျိုးသုဉ်းစဉ်ကာလအတွင်းတုန့်ပြန်မှုသည်လီဗာတစ်ခုချင်းစီနှင့်ဆက်စပ်သောဆုလာဘ်များမှယခင်က ၀ ယ်ယူခဲ့သည့်အခြေအနေတွင်ရှိသည့်မက်လုံးပေးတန်ဖိုးကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏မျိုးသုဉ်းမှုမတိုင်မီ preference ရမှတ်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ t(11) = -7.60, P<0.01], ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ Pre- မျိုးသုဉ်း PR စနစ်ရမှတ် [ကိုကင်း၏ breakpoints ကို: 65.0 ± 7.8; ချိုသောရေ၏ breakpoint: 31.6 ± 2.5; F(1, 11) = 22.48, P<0.01], ကြွက်များကိုကင်းလီဗာအပေါ်ထက်ချိုသောရေနှင့်ဆက်စပ်သောလီဗာအပေါ်ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်စွာတုံ့ပြန်ခဲ့သည် [F(1, 11) = 6.88, P<0.05; ပုံ 5A), အထူးသဖြင့်နှစ်ခုခရိုနီအပေါ်တုံ့ပြန်အတွက်ခြားနားချက်ဆုကြေး၏အမြင့်ဆုံး [အချိန်က X အမျိုးအစားရှိရာပထမဦးဆုံး3မိအတွင်းမှာ: F(14, 154) = 6.74, P<0.01; ပုံ 5B] ။ ဤသည်ရလဒ်ကိုကင်းများ၏တိုက်ရိုက်လှုံ့ဆော်အကျိုးသက်ရောက်မှုထွက်အုပ်ချုပ်သောအခါကြောင်းပြ, ကြွက်များကိုကင်းထက်ချိုမြိန်ရေရရှိရန်ကြိုးပမ်းပိုမိုအလုပ်လုပ်ကြသည်။
ကိုကင်းနှင့်အ saccharin များအတွက်တုံ့ပြန်၏တစ်ပြိုင်တည်းပါမျိုးသုဉ်း။
အတူတူယခင်သုတေသနနှင့်အတူ , စမ်းသပ်ချက်များ၏အထက်တွင်စီးရီးပြင်းပြင်းထန်ထန်အများဆုံးကြွက်အဘို့, သွေးကြောသွင်းကင်း၏အကျိုးကိုတန်ဖိုးကို saccharin နှင့်အတူဒူရေရဲ့တန်ဖိုးကိုထက်အားနည်းကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ စမ်းသပ်ချက်များကအောက်ပါစီးရီး (တွေ့မြင်တိကျစွာရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖို့အဆင်ပြေအောင်ကုန်ကျ-effect ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးဆုလာဘ်တန်ဖိုးကို၌ဤခြားနားချက်များ၏ပြင်းအား quantifying ရည်ရွယ်ခဲ့သည် ကုန်ကြမ်းနှင့်နည်းစနစ်များ) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, ဤစမ်းသပ်ချက်များတွင်ကြွက်များပထမဦးဆုံးအားဖြည့်တဲ့ FR1 အချိန်ဇယားအောက်တွင်အခြားရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းသို့မဟုတ် saccharin မှလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ထိုအခါသူတို့ကချိုမြိန် preference ကို (6 ရက်ဆက်တိုက်အနှံ့အဘယ်သူမျှမတိုးပွားလာသို့မဟုတ်လျော့ကျလာလမ်းကြောင်းသစ်) ၏တည်ငြိမ်သည်အထိကအနည်းဆုံး3ရက်ဆက်တိုက်စဉ်အတွင်း discrete-စမ်းသပ်မှုတွေရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ 11 ကြွက်ပါဝင်ပတ်သက်ရသောပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှု, ခုနှစ်, preference ကို၏တည်ငြိမ်ပြီးနောက်, ချိုမြိန်ရေ (သို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်) ရရှိရန်လိုအပ်သည်တုံ့ပြန်မှုများ၏အရေအတွက်သည်တဖြည်းဖြည်းများမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်သည်အထိကင်းဘို့ (ဆုလာဘ်နှုန်း 1 တုံ့ပြန်မှုမှာ fixed) ထို 16 ကြိမ်မှ2ကနေတိုးပွားလာခဲ့သည် preference ကိုနှင့်လျစ်လျူ point ရဲ့အရှင်မှတ်ပုံတင်။ လျစ်လျူ၏အမှတ် (သည်လည်းသို့မဟုတ်တခါတရံတွင်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တန်းတူရေး၏အချက်ခေါ်) ကြွက် (ကြည့်ရှုအညီအမျှဖြစ်စေဆုလာဘ်ကိုရှေးခယျြမှာဆွေမျိုးကုန်ကျစရိတ်နဲ့ကိုက်ညီ ကုန်ကြမ်းနှင့်နည်းစနစ်များ) ။ လျစ်လျူအချက်များချိုမြိန်ရေမှသွေးကြောသွင်းကင်းအဖြစ်ကြင်နာ၌ရှိသကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ်များ၏တန်ဖိုးများကိုတိုင်းတာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်ဘုံမက်ထရစ်ကိုပေး။ ကိုကင်းနှင့်အ saccharin အကြားလျစ်လျူ၏အချက် X ကိုညီမျှလျှင်ဥပမာ,, ထို့နောက်တဦးတည်းအဆုံးစွန်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုကင်းများ၏ထက် X ကိုကြိမ် သာ. ကြီးမြတ်သည်လာသောအခါကင်း၏တန်ဖိုးချိုမြိန်ရေ၏တန်ဖိုးနှင့်ညီမျှကြောင်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း saccharin နှင့်အတူဒူရေကုန်ကျစရိတ်တိုးမြှင့်သည့်အခါ, ကြွက်တဖြည်းဖြည်း [ကင်းဖို့သူတို့ရဲ့ preference ကိုပြောင်းရွှေ့F(4, 44) = 30.53, P<0.01; ပုံ 6A] ။ အမြင့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ် (ကိုကင်းသည်ဆိုလိုသည်မှာ 16 ကြိမ်) မှာလုံးဝနီးပါးအားလုံးကြွက် (ဆိုလိုသည်မှာ 10 11 မဟုတ်တဲ့မူးယစ် သာ. နှစ်သက်ကြွက်တစ်ဦးစုစုပေါင်းထဲက) ကိုကင်းဖို့သူတို့ရဲ့ preference ကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားလေသည်။ [ပြီးစီးခဲ့ရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေ၏နံပါတ် saccharin ၏ကုန်ကျစရိတ်အားဖြင့်မထိခိုက်ခဲ့မှတ်ချက်F(4, 44) = 1.6, NS; ပုံ 6B]; ဒီ preference ကိုအတွက်ပြောင်းကုန်ပြီစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် generalized လျှော့လွှမ်းမိုးမှုမခံခဲ့ရကြောင်းပြသထားတယ်။ ချိုမြိန်ရေဆွေမျိုးကုန်ကျစရိတ်တစ်ဦးအတွင်း-session တစ်ခုထုံးစံ၌တိုးပွားလာသောအခါအလားတူရလာဒ်များ [ရယူခဲ့ကြသည်F(3, 33) = 22.54, P<0.01; ပုံ 6A, B,] ကြွက်ဟာရရှိနိုင်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုလျင်မြန်စွာ, ရုံးတင်စစ်ဆေး-by-ရုံးတင်စစ်ဆေး reevaluation အပေါ်သူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှု-based ဆုံးဖြတ်ချက်ဖွဲ့သောအကြံပြုခြင်း။ ကြိုးစားအားထုတ်မှု 7.8 (အတွင်း-session တစ်ခုပြဌာန်းခွင့်, ဖြစ်ခဲ့သည်ချိုမြိန်ရေအတှကျတောင်းဆိုသည့်အခါအရေးကြီး between- နှင့်အတွင်း-session ကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်, လျစ်လျူ၏အမှတ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည် R2 = 0.98, P<0.01) မှ 8.5 (အကြား session ကိုပြဌာန်းခွင့်, R2 = 0.99, P<0.01) ကြိမ်နှုန်း, ပုံမှန် sigmoid function ကိုအတူရာခိုင်နှုန်းအချက်အလက်များ၏ကွေးလျောက်ပတ်ခြင်းဖြင့်ခန့်မှန်းအဖြစ် (ကိုကြည့်ပါ) ကုန်ကြမ်းနှင့်နည်းစနစ်များ) ။ ဤသည်ကြီးမားသောဆွေမျိုးကုန်ကျစရိတ်ကိုကင်း၏တန်ဖိုး saccharin နှင့်အတူဒူရေရဲ့တန်ဖိုးကိုထက်အများကြီးနိမ့်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထပ်မံကင်း၏ဆွေမျိုးတန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ရန်, ကိုကင်းနှင့်အ saccharin အကြားလျစ်လျူ (သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တန်းတူရေး) ၏အမှတ်တစ်ဦးအပိုဆောင်းအုပ်စုသည် (ထဲမှာ saccharin များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခု function ကို (0.0016-0.2%) အဖြစ်အတွင်း-session ကိုတိုင်းတာခဲ့သည်n ကြွက်၏ = 10) ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း saccharin ပိုမိုနှစ်သက်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကွေးကို saccharin ၏ပြင်းအားများပြားလာခြင်းနှင့်အတူလက်ျာဘက်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ F(3, 27) = 14.26, P<0.01; ပုံ 7A] ။ ရလဒ်အဖြစ်လျစ်လျူ၏အမှတ် (အားလုံး R2 0.96 ထက် သာ. ကြီးမြတ်ကြ၏ P<0.01) ကိုကင်းနှင့် saccharin အကြား saccharin ၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူ 8.3 အထိ linearly တိုးတက်လာခဲ့သည် [R2 = 0.988, P<0.01; ပုံ 7B] ။ အထူးသဖြင့်အကျိုးစီးပွား, လျစ်လျူ၏အချက်ပျမ်းမျှသွေးကြောသွင်းကင်း၏တန်ဖိုးအများစုကြွက်၌ဤအနိမ့်အာရုံစူးစိုက်မှု၏တန်ဖိုးနှင့်ညီမျှခဲ့ကြောင်းအကြံပြု, နိမ့်ဆုံး saccharin အာရုံစူးစိုက်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ 1%) မှာ 0.0016 အနီးဖြစ်ခဲ့သည်။
saccharin အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခု function ကိုအဖြစ်ကိုကင်းများ၏ဆွေမျိုးတန်ဖိုးခန့်မှန်းချက်။
ကြွက်အများစုသည်သွေးကြောထဲသို့ဝင်သည့်ကိုကင်းများထက်ချိုသောရေကိုကြိုက်သော်လည်း၊ စမ်းသပ်မှုများအရကိုကင်း - ကြိုက်တတ်သောကြွက်ငယ်လေးများ (စမ်းသပ်မှု၏ ၅၀%) ကိုကင်းရွေးချယ်မှုသည်အမြဲတမ်းတွေ့ရှိခဲ့သည် ကိုကာကိုလာကြိုက်သည့်ကြွက်များ၏ကြိမ်နှုန်းကိုခန့်မှန်းရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမ်းသပ်မှုများ၏ကြွက်များအပါအ ၀ င်လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်အတွင်းဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများအားနောက်ကြောင်းပြန်ဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့သည်။ ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကစုစုပေါင်း ၁၈၄ အနက် (ဆိုလိုသည်မှာ ၈.၇%) မှကြွက် ၁၆ ကောင်သည် saccharin နှင့်ချိုသောရေထက်သွေးကြောသွင်းအားကိုကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အတိတ်ကိုကာကိုလာသုံးစွဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကိုကိန်းပိုကြိုက်သည့်ကြွက်များ၏ကြိမ်နှုန်းအပေါ်အကဲဖြတ်ရန်အတွက်ရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်သောကိုကင်းစုစုပေါင်းပမာဏကိုလူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တွက်ချက်သည်။ ဤပမာဏသည် ၀ မှ ၄၈၆.၈ မီလီဂရမ်မှ (သို့) ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၃၈၈ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ရှိပြီး ၅ ခုတန်းတူညီမျှ (၅၅ မီလီဂရမ်တစ်ခုစီမှနောက်ဆုံးပွင့်လင်းသောကြားကာလမှအပ) ဖြင့်ခွဲခြားခဲ့သည်၊ (ပုံ 8A) ။ ကိုကင်း- သာ. နှစ်သက်တစ်ဦးချင်းစီ၏ကြိမ်နှုန်း Kruskal-Wallis ဟာ [အသုံးပြုနိုင်သည်အတိတ်ကာလကိုကင်း၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူအနည်းငယ်ရှိသော်လည်းသိသိသာသာတိုးတက် H(4, 184) = 3.47)] နှင့် 15% အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျန်ရစ် (ပုံ 8B) ။ ချိုမြိန်ရေများအတွက် preference ကိုအနည်းငယ်အတိတ်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူလျော့နည်းသွားသော်လည်းအလားတူပင်, preference ကိုမပြောင်းကုန်ပြီ [တောင်မှပြင်းထန်မှု၏အမြင့်ဆုံးဒီဂရီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိခဲ့F(4, 179) = 2.42, P<0.05; ပုံ 8C] ။ ထို့ကြောင့်နေပါစေအတိတ်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဘယ်လောက်မိုးသည်းထန်စွာ, ကြွက်များတွင်ကင်း preference ကိုရှားပါးခြင်းနှင့်ခြွင်းချက်နေဆဲဖြစ်သည်။
နမူနာကောစမ်းသပ်မှုတွေ saccharin စဉ်အတွင်းအဲဒီကြွက်ကအခြားကြွက်များ၏အများစုသလောက်သောက်ကတည်းကအရေးကြီးကင်း- သာ. နှစ်သက်ကြွက်များတွင်ကင်း preference ကို (စိတ်ဝင်စားကြောင်းသို့မဟုတ် saccharin နှင့်အတူဒူရေမှခြင်းကိုမနှစ်သက်တစ်ဦးမျှသာမရှိခြင်းတွေကပေါ်ကနေမဟုတ်ခဲ့ 0.28 ±နှိုင်းယှဉ် 0.02 ± 0.31 0.01-s ကိုလက်လှမ်းနှုန်း 20 ml) ။ ; မတူဘဲ, ကိုကင်းနမူနာစမ်းသပ်မှုတွေကာလအတွင်းကင်း- သာ. နှစ်သက်ကြွက် [16.0 7.6 ± 54.1 s ကိုနှိုင်းယှဉ် 6.5 ± Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းဖို့အများကြီးပိုမြန်သည်အခြားကြွက်များ၏အများစုထက်တုံ့ပြန် F(4, 179) = 2.42, P<0.05], မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်သာ။ ကြီးမြတ် avidity အကြံပြုသည်။ ကိုကင်း - ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ကြွက်များတွင်ကိုကင်း၏ဤနှိုင်းယှဉ်မှုသည်သွေးကြောသွင်းအတွင်းကိုကင်း၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်မဟုတ်ပါ။ F(1, 182) = 1.09, Group မှ x ကိုအချိန်: F(9, 1638) = 1.72; ပုံ 9] ပထမဦးဆုံးကိုကင်းနမူနာအောက်ပါတိုင်းတာအဖြစ်နောက်ဆုံး3တည်ငြိမ်စမ်းသပ်ခြင်းအစည်းအဝေးများကျော်ပျမ်းမျှ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပိုကောင်း (ကိုကင်း preference ကို၏အစွမ်းသတ္တိကိုကင်း- သာ. နှစ်သက်ကြွက်တစ်အဖွဲ့ခွဲဆုံးဖြတ်ရန်n = ၃) FR3 လေ့ကျင့်မှု (ကိုကင်းနှင့် saccharin ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှု ၂၄ ကြိမ်နေ့စဉ်) နှင့်ရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်ခြင်း (၃၆ ရက်သင်တန်း) သည်တာရှည်စွာအစားအသောက်ကိုကန့်သတ်ထားသည် (ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့အစာအာဟာရကိုယ်အလေးချိန်၏ ၈၅%) ရှိသည်။ သဘာဝကယ်လိုရီသကြား - ကိုကင်းနှင့် saccharin (၀.၂%) နှင့်ကိုကင်းနှင့်သရက်ကို့စ် (၁၀%) အကြားရွေးချယ်ရန်။ အစားအစာကန့်သတ်ထားသည့်ကြွက်များတွင် saccharin အား sucrose ဖြင့်အစားထိုးခြင်း၏ရည်မှန်းချက်မှာ၎င်း၏ဇီဝကမ္မအသုံး ၀ င်မှု (ဆိုလိုသည်မှာကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်သက်သာခြင်း) အားဖြင့်ချိုသောရေ၏တန်ဖိုးနှင့်အကျိုးစီးပွားကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ယခင်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီ ကျနော်တို့အစားအစာ-ကန့်သတ်ကြွက်များအကြီးအကျယ်ကြိုက်တတ်တဲ့နှင့် saccharin စမ်းသပ်ပြီး (5%) (အဲရစ် Augier နှင့် Serge Ahmed က, အတည်မပြုရသေးသောဒေတာ) ၏အမြင့်မားဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုထက် sucrose (20-0.2%) ရရှိရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်သောရှေ့ပြေးလေ့လာမှုမှာပြသခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်, အစားအစာ-ကန့်သတ်, Non-မူးယစ်ဆေးပိုနှစ်သက်ကြွက် (တစ်ဦးအပြိုင်အဖွဲ့ခွဲအတွက်n = 8, အထက်ဖော်ပြထားတဲ့ကိုကင်း - ကြိုက်နှစ်သက်ကြွက်3ကဲ့သို့တူညီသောအလိုက်နှင့်အပြုအမူသမိုင်း), sucrose ကိုကင်းကျော်ချိုမြိန် preference ကိုများအတွက်ကုန်ကျစရိတ် - အကျိုးသက်ရောက်မှုကွေး [အောက်ခံနှင့်နှစ် ဦး စလုံးပြောင်းလဲ] [ချိုသောအမျိုးအစား: F(1, 7) = 21.62, P<0.01; ပုံ 10A] ။ ရလဒ်အဖြစ်နှစ်ခုဆုလာဘ်များအကြားလျစ်လျူ၏အချက်, 5.5 အကြောင်း 10.6 ကနေတိုးပွားလာကြောင်း sucrose အကြံပြုခြင်းပေါင်းကယ်လိုရီဘို့လိုအပ်ကြောင်းနီးပါးကိုကင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါချိုမြိန်ရေ၏တန်ဖိုးနှစ်ဆ။ ဆနျ့ကငျြ, ကိုကင်း- သာ. နှစ်သက်ကြွက်အတွက် sucrose [ကယ်လိုရီဘို့လိုအပ်ကြောင်းကြားမှသိသိသာသာဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်အမျိုးအစားကိုကင်းများအတွက် preference ကိုမပြောင်းခဲ့ပါ: F(1, 2) = 15.43; ပုံ 10B].
တစ်ဦးချင်းစီ preference ကိုတစ် function ကိုအဖြစ်ကိုကင်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျား။
ကိုကင်း preference ကိုအပေါ်အစားအသောက်ကန့်သတ်သက်ရောက်မှု။
စမ်းသပ်ချက်များပစ္စုပ္ပန်စီးရီးအများအပြားအရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်များပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာနောက်ဆက်တွဲရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် / သို့မဟုတ်လွဲမှားစွာအနက်ကိုရှောင်ရှားဖို့အစပိုင်းမှာဖော်ပြထားခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ sucrose နှင့်အတူနောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှု မှလွဲ. ကြွက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတလျှောက်လုံးမဟုတ်အစားအစာသို့မဟုတ်ရေ-ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်ချိုမြိန်ရေများအတွက် preference ကို - ထိုအခြားရွေးချယ်စရာ nondrug ဆုလာဘ် - ဒီနေရာမှာအစီရင်ခံကင်းကျော်ဆာလောင်ခြင်းမှတွေကပေါ်ကနေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒုတိယအချက်မှာလက်ရှိလေ့လာမှုအတွက်ကြွက်ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်စမ်းသပ်ပြီးမခံရမီအများအပြားအခြားရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းနှင့်အချိုမြိန်ရေမှလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ရှိရှိကွှေးကျွောယခင်သုတေသနအတွက်သရုပ်ပြအဖြစ် - အဘယ်သူမျှမကအခြားရှေးခယျြမှုရရှိနိုင်သောအခါဤကနဦးလေ့ကျင့်ရေးရှင်းလင်းစွာကြွက်များအလွယ်တကူသွေးကြောသွင်းကင်း Self-စီမံခန့်ခွဲကြောင်းပြသ , , , ။ တတိယ, discrete-စမ်းသပ်မှုတွေရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထဲမှာကြွက် saccharin နှင့်အတူဒူကင်းသို့မဟုတ်ရေဖြစ်စေရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည် (ဆိုလိုသည်မှာရွေးချယ်မှုအပြန်အလှန်-သီးသန့်သို့မဟုတ်ဖြစ်စေ / သို့မဟုတ်ခဲ့ပါတယ်) ။ ရလဒ်အနေနဲ့တဦးတည်းဆုလာဘ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကြွက်သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးဖော်ပြခွင့်ပြုသည်အခြားရွေးချယ်စရာဆုလာဘ်ဖယ်ထုတ်လိုက်။ တနည်းအားဖြင့်တဦးတည်းဆုလာဘ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာဆုလာဘ်တစ်ခုတို့ဖြင်ညီမျှခဲ့သည်။ အခွင့်အလမ်းကုန်ကျစရိတ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တပါးဆုလာဘ်ကိုရွေးချယ်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်သည်အခြားဆုလာဘ်ရယူ၏အခွင့်အလမ်းများဆုံးရှုံးခြင်းမှစာအဆက်အသွယ်။ စတုတ္ထရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေ၏နံပါတ်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးအကဲဖြတ်အပေါ် differential ကိုဆုလာဘ် satiation ၏နောက်ဆုံးသဖွငျ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကာကွယ်တားဆီးဖို့တစ်နေ့လျှင်သာ 8 ဖို့ကန့်သတ်ခဲ့သည် ။ သို့သော်လေယာဉ်မှူးလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ 40 အထိနေ့စဉ်ရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေ၏နံပါတ်တိုးမြှင့်ချိုမြိန် preference ကို (စာရာ Dubreucq, Lauriane Cantin နှင့် Serge Ahmed က, အတည်မပြုရသေးသောရလဒ်များသည်) အပေါ်အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပဉ္စမ, စမ်းသပ်မှုတွေကိုစားသုံးမိအပြုအမူအပေါ်ကိုကင်းစုဆောင်းခြင်း၏တိုက်ရိုက် anorexigenic အကျိုးသက်ရောက်မှုလျှော့ချဖို့ကအနည်းဆုံး 10 မိနစ်လှပတဲ့ခဲ့ကြသည် - တခြားသုတေသနအတွက်အကြံပြုအဖြစ်သိသာတဲ့ကိုကင်းများ၏မျက်နှာသာအတွက်ရွေးချယ်မှုနေကြပါတယ်မယ်လို့တစ်အကျိုးသက်ရောက်မှု ။ ကြွက်အများစုသည်အလိုအလျောက်ကိုကင်းကိုမသောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြသောကြောင့်ဤတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ စမ်းသပ်မှုအကွာအဝေးသည်သူ့ဟာသူအတွင်းရှိကြွက်များ၏ကိုကင်းကိုစိတ်မဝင်စားသောအကြောင်းရင်းမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါကကြွက်များကိုမိမိကိုယ်မိမိစီမံကွည့်ရှုရာတွင် ၁၀ မိနစ် (သို့မဟုတ်) ကြာကြာသောက်သုံးရသည့်အချိန်တိုလေးများဖြင့်ကိုကာကိုလာ , ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အထက်တွင်ဖော်ပြထားစမ်းသပ်ချက်၏စီးရီးအတွက်စမ်းသပ်ပြီးကိုကင်းများ၏ယူနစ်ထိုး (ဆိုလိုသည်မှာ 0.25 ပြုတ်ရည်နှုန်း mg) ကျယ်ပြန့်ကြွက်များတွင်ယခင်သုတေသနများတွင်အသုံးပြုခဲ့မြင့်မားထိုးဖို့အလယ်အလတ်ဖြစ်ပါသည် , , ။ ယခင်လေ့လာမှုမှာပြထားတဲ့အတိုင်းတကယ်တော့အများစုကြွက်များကိုကင်းများ၏ယူနစ်ထိုး6မီလီဂရမ်၏ Sub-တက်ခြင်းထိုးမှတက် 0.25 ကနေ 1.5-ခြံတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်လျှင်ပင် saccharin နှင့်အတူဒူရေပိုနှစ်သက်ဆက်လက် ။ အရေးကြီးတာက, ချိုမြိန် preference ကိုအပေါ်ကိုကင်းဆေးများ၏သက်ရောက်မှုမရှိခြင်းလည်းကင်း၏လုပျသငျတနျဖိုးချိုမြိန်ရေရဲ့တန်ဖိုးကိုထက်နိမ့်ကြောင်းအကြံပြု, စားသုံးမှု၏တိုးချဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်တင်းမာမှုကိုအောက်ပါမြင်ရ၏ ။ ဒီဆှေးနှေးခ၏ကျန်ရှိသောလွတ်လပ်စွာယင်း၏ထိုး၏ကိုကင်းများ၏ဆွေမျိုးတန်ဖိုးကိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေသည်အဘယ်ကြောင့်ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ရှင်းပြပါ။
ယေဘုယျအားနှင့်အထက်သတင်းအချက်အလက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုဆိုလိုသည်မှာသောက်သုံးရေ (အတိတ်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဘယ်လောက်လေးလံနေပါစေ, ကြွက်များ၏ကြီးမားသောအများစုအလွယ်တကူနဲ့လုံးဝနီးပါးဇီဝ inessential ကြောင်းအခြားအကြိုးလှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းအရှုံးမပေးကွောငျးဖျောပွသ non-ကယ်လိုရီဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်နဲ့အတူဒူရေ) ကြီးထွားမှု, ရှင်သန်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်မျိုးပွားမှုအတွက်မရှိမဖြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ အတိတ်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုပြင်းထန်မှု၏အမြင့်ဆုံးဒီဂရီမှာ 15% ထက်နည်းပါးလာကြွက်များကိုသာသေးငယ်တဲ့လူနည်းစု, ကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်မှုအောင်၏အခွင့်အလမ်းရှိနေသော်လည်းကင်းယူမှဆက်လက်။ အရေးကြီးတာကအဲဒီအနည်းငယ်ကြွက်, ကိုကင်းကြိုက်တတ်တဲ့ဆက်လက်အချိန်မှာတောင်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းနှင့်ကယ်လိုရီသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်သက်သာရာနိုင်ကြောင်းသဘာဝသကြားဓာတ် (ဆိုလိုသည်မှာ, sucrose), မူးယစ်ဆေးစွဲ (ဆိုလိုသည်မှာပြန်ပြောပြတဲ့အပြုအမူကိုကမ်းလှမ်းအခြားအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆက်လက် သို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်) ။ ဆနျ့ကငျြ, ကြွက်များ၏ကြီးမားသောအများစုအတွက်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းမှအလျင်မြန်, Self-အစပျိုး abstinence ပြင်းပြင်းထန်ထန်သွေးကြောသွင်းကင်း၏တန်ဖိုးသည်ယခင်ကယူဆထက်အားနည်းကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒီအနက်ကိုထောက်ခံကြောင်း, ဤကြွက်များတွင်စနစ်တကျကုန်ကျစရိတ်-effect ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကင်းချိုမြိန်ရေနိမ့်ဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုအနီး, သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုလှေကားအပေါ်အနိမ့်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဤသည် hedonic အနေအထားစမ်းသပ်ချက်၏ပစ္စုပ္ပန်စီးရီးအတွက်စမ်းသပ်ပြီးကင်းဖို့ကွဲပြားခြားနားသောအခြားနည်းလမ်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်လျစ်လျူရမှတ် (၏ဖြန့်ဖြူးကိုယ်စားပြုတစ်ခုတည်းဂရပ်များတွင်မြင်နိုင်ပါသည်ပုံ 11) ။ ကိုကင်းများ၏အနိမ့်တန်ဖိုးကိုကင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လီဗာ၏အဘယ်ကြောင့်အခြေအနေများကိုမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုကရှင်းပြသည်, မျိုးသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းတိုင်းတာအဖြစ်, 1000 ဒီလီဗာကနေကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးထပ်ခါတလဲလဲထက်ပိုရှိနေသော်လည်းအတော်လေးနိမ့်နေဆဲဖြစ်သည်။ ယခင်လေ့လာမှုမှာ, (6 ထံမှ 0.25 မီလီဂရမ်ဦးရေအများဆုံးမှ) ကင်းထိုးတစ် 1.5-ခြံတိုးပင်ကင်းမှတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုအောက်ပါပုံကိုကင်းမှ preference ကိုပြောင်းလဲရန်ဖို့လုံလောက်သောမဟုတ်ခဲ့ဘယ်ကြောင့်သွေးကြောသွင်းကင်း၏အားနည်းဆွေမျိုးတန်ဖိုးကိုကိုလည်းရှင်းပြပါစေခြင်းငှါ Self-အုပ်ချုပ်ရေး ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကလည်းကင်း preference ကိုလေ့လာဖို့အဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြဖို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်ကအခြားရွေးချယ်စရာဆုလာဘ်၏ကုန်ကျစရိတ်တိုးမြှင့်ဖို့မကြာခဏလိုအပ် , ။ ဥပမာ, မျောက်တွေကိုအများအပြားမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများအတွက်ကင်း၏ကုန်ကျစရိတ် (ဆိုလိုသည်မှာ FR10) ဖြင့်ကင်း preference ကိုမျက်နှာသာ, အစားအစာ၏ကုန်ကျစရိတ် (ဆိုလိုသည်မှာ FR100) ထက်အများကြီးနိမ့်ခဲ့ , ။ ဤနေရာတွင်ပြထားတဲ့အတိုင်းချိုမြိန်ရေ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုကင်း၏ကုန်ကျစရိတ်ထက်အများကြီးမြင့်မားလာသောအခါ, ကြွက်လည်းကင်းကြိုက်တတ်တဲ့။
ရလဒ်တွေကိုဒီပုံစံ (ဆိုလိုသည်မှာအများစုကြွက်များတွင်ကင်း abstinence အနည်းငယ်ကြွက်များတွင်ကင်း preference ကို) ကိုကင်းစွဲဖို့ခံနိုင်ရည်နဲ့အားနည်းချက်အဘို့သက်သေသာဓကအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင် ။ အထူးသကကြွက်သာလူနည်းစု, ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပင်ကျယ်ပြန့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအောက်ပါစွဲမဖွံ့ဖြိုးနိုင်မတစ်ဦးချင်းစီကြောင်းဒဏ်ခံသူတွေကို၏ကြီးမားသောအများစုတို့တွင်ဤရောဂါမှအားနည်းချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုထက်မရှေးခယျြမှုနှင့်အတူစံစမ်းသပ် setting တွင်, ဒဏ်ခံကြွက်ကအခြားရွေးချယ်စရာ default အနေဖြင့်မျှသာကင်းယူလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့အမူအကျင့်တစ်ခုပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေ (လုံးရှေးခယျြမှုသို့မဟုတ်အခွင့်အလမ်းဆိုလိုသည်မှာမရှိခြင်း) ရန် "မျှသာအနေနဲ့မျှော်လင့်ထားတုံ့ပြန်မှု" ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုနှင့်သေချာပေါက်တစ်ခုနောက်ခံစွဲ-related ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုထင်ဟပ်မဟုတ်ဘူး ။ စွဲဖို့ခံနိုင်ရည်နဲ့အားနည်းချက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အနက်ကိုကျနော်တို့ယေဘုယျအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ရောဂါအကြောင်းကိုသိနှင့်အထူးသဖြင့်ကိုကင်းစွဲကောင်းစွာမြေပုံ။ ပထမဦးစွာအထွေထွေလူဦးရေအသက် 15-54 နှစ်ပေါင်းတို့တွင်အစဉ်အမြဲကင်းစွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကိုကင်းသွားကြိုးစားခဲ့ကြသောသူတို့၏အမျိုးအ 12-16% နှင့် ပတ်သက်. , ။ ဒုတိယအချက်မှာမကြာသေးမီ-စတင်ခြင်းကိုကင်းသည်အသုံးပြုသူများအကြား, (ရွေးချယ်ထားသောငုပ်လျှိုးနေလူတန်းစားမော်ဒယ်ပေါ် မူတည်. %4မှ 16 ကနေအထိ) တစ်ခုသာလူနည်းစုကိုကင်းသုံးစွဲမှုစတင်ပြီးနောက် 24 လအတွင်းကင်းစွဲဖြစ်လာ ။ ယေဘုယျအားဤ epidemiological တွေ့ရှိချက်လူ့ကိုကင်းသုံးစွဲသူကြီးအများစုနောက်ဆုံးမှာမူးယစ်ဆေး, ကြွက်များတွင်ကဒီမှာလေ့လာတွေ့ရှိကင်းရွေးချယ်မှု၏ပုံစံနှင့်အတူပုံတသမတ်တည်းသောကောက်ချက်စွဲဖြစ်လာမပြပါ။ ဒါဟာကင်းစွဲဖို့ခံနိုင်ရည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကဤတွေ့ရှိချက်များ၏အနက်ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့သောနှင့်ပစ္စုပ္ပန်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဝေးကြောင်း, သို့သော်, သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ (ဥပမာ, Non-ရာ၌ setting များကိုကြောင့်) ဒီမှာတွေးဆအဖြစ်သူတို့က, ဒဏ်ခံဖြစ်ကြသည်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အများဆုံးလူ့ကင်းအသုံးပြုသူများအစွဲမဖွံ့ဖြိုးပါဘူးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်သူတို့ကလုံလုံလောက်လောက်ကျယ်ကျယ်ကင်းအသုံးမကြမျှသာဖြစ်သောကြောင့်။ အကောင်းဆုံးကတော့အဲဒီနှစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြေအကြားဆုံးဖြတ်ဖို့, တဦးတည်းကိုပထမဆုံးရွေးချယ်အစဉ်အဆက် (ဆိုလိုသည်မှာ, ကျယ်ပြန့်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းရှိနေသော်လည်းစွဲမဖွံ့ဖြိုးခဲ့ဘူး) ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုတဲ့သူတွေကိုကင်းကြိုးစားခဲ့ပြီးတော့ကိုကင်းစွဲဖို့ဒဏ်ခံများမှာမည်မျှသူတို့ထဲကခန့်မှန်းကြသူလူတို့တွင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရပါမည် ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဦးတည်းကဒီ epidemiological စံပြရနိုင်အနီးဆုံး Lee က Robin နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဘိန်းဖြူသုံးစွဲသူတစ်ဦးသည်ယခုအခါအသက်သော်လည်းခိုင်လုံမှုရှိနေသေးကြောင်း, epidemiological စစ်တမ်း၌ရှိ၏ , ။ ဤသည်မှာစစ်တမ်းဗီယက်နမ်အတွက်နာတာရှည်အခြေခံပေါ်မှာဘိန်းဖြူကိုသုံးခဲ့သော (90% ခန့်) ဗီယက်နမ်စစ်ပြန်များ၏ကြီးမားသောအများစုပင်ကိုယ်ထိလက်ရောက်မှီခိုဖြစ်လာ၏အချက်ရန်, အလွယ်တကူနှင့်တာရှည်ခံစစ်ကနေပြန်လာအပေါ်သို့ဘိန်းဖြူအသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်ကြောင်းအစီရင်ခံ ။ လူ ဦး ရေ၏အနည်းစု (ဆိုလိုသည်မှာ ၁၀% ခန့်) သာစစ်အပြီးဘိန်းဖြူကိုဆက်လက်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအတွင်းရှိစစ်သားများအတွက်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးပြီးဘိန်းဖြူသုံးစွဲမှုသည်စျေးပေါ။ လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ပျော်စရာကောင်းသောအပြင်စစ်ဖိစီးမှုများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည် ။ သူတို့မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုထိန်းချုပ်အာဏာကိုဆုံးရှုံးနေသောကြောင့်ရလဒ်အဖြစ်စစ်သားဖြစ်ကောင်းသည်အခြားကြိုးသို့မဟုတ်ထွက်ပေါက်လှုပ်ရှားမှုများ default အနေဖြင့်ဘိန်းဖြူကို အသုံးပြု. နှင့်မခံခဲ့ရပါ။ ဤသည်အနက်ကိုဤမျှလောက်များစွာသောစစ်ပြန် (ဆိုလိုသည်မှာ 90%) အိမ်သို့ပြန်လာအပေါ်သို့ဘိန်းဖြူအသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်, အဘယ်ကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခို၏နာတာရှည်နှင့်မိုးသည်းထန်စွာဘိန်းဖြူအသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်သေအထောက်အထားပေမယ့်ကရှင်းပြသည်။ ထို့ကြောင့်နာတာရှည်, မိုးသည်းထန်စွာဘိန်းဖြူသုံးစွဲမှုရှိနေသော်လည်းအများစုကိုစစ်သားဘိန်းဖြူစွဲဖို့ခံနိုင်ရည်နျြရစျ။ အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, ကိုကင်းစွဲဖို့ခံနိုင်ရည်အဘို့အဘယ်သူမျှမညီမျှသောသက်သေအထောက်အထားလူသားတွေအတွက်နာတာရှည်, မိုးသည်းထန်စွာကင်းအသုံးပြုမှုကိုအပြီးလက်ရှိတွင်လည်းမရှိ။ သို့သော်ပါကင်ရောဂါအတွက်နာတာရှည် dopaminergic ဆေးဝါးမှစွဲလမ်းကဲ့သို့အပြုအမူမှခံနိုင်ရည်တချို့ဖြစ်နိုင်သောအထောက်အထားများကိုလည်းမရှိ , ။ neurodegeneration ကြောင့် midbrain dopamine အာရုံခံ၏နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်, Parkinsonian လူနာ dopamine ရှေ့ပြေး levodopa နှင့်တိုက်ရိုက် dopamine agonists အပါအဝင်နာတာရှည် dopamine အစားထိုးကုထုံးကိုခံယူလော့။ ဒီနာတာရှည်ကုသမှုသင်တန်းမှာတော့ဒီလိုလူနာအချို့ကိုနောက်ဆုံးမှာပြင်းထန်မော်တာများနှင့် Non-မော်တာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိနေသော်လည်းအလွန်အကျွံ dopaminergic ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုကိုတိုးတက် ။ ဤသည် syndrome ရောဂါမကြာခဏ dopamine dysregulation syndrome ရောဂါလို့ခေါ်ပါတယ်, လက်ရှိတွင်မူးယစ်စွဲနေတဲ့ပြည်နယ်ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ဖြစ်တွေးဆနေပါတယ် ။ ဒါဟာလက်ရှိ dopaminergic ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုနှစ်ပေါင်းနေသော်လည်းကျန်ရှိအများစုကဒီရောဂါမှဒဏ်ခံဖြစ်လာဖွယ်ရှိကြောင်း, အရှင်အကြံပြုခြင်း, ဒီရောဂါသာနာတာရှည် (10% ထက်နည်းပါးလာဆိုလိုသည်မှာ,) dopamine အစားထိုးကုထုံးဖြင့်ကုသသောလူနာတစ်ဦးသေးငယ်တဲ့လူနည်းစုအတွက်ပေါ်လာသောခန့်မှန်း ။
ကြွက်များတွင်လူသားများအတွက်လိုပဲကင်းအသုံးပြုသူများကိုသာလူနည်းစုကိုကင်းစွဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အဆိုပါယူဆချက်ပင်ကျယ်ပြန့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပြီးနောက်ယခင်ကတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားချဉ်းကပ် အသုံးပြု. သည်အခြားသုတေသီများအားဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ် , ။ ဆန်းသစ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော်လည်း, ဒီချဉ်းကပ်မှု၏တရားဝင်မှုသို့ရာတွင်သတိနဲ့စဉ်းစားရပါမည်။ ဒါဟာဦးနှင့်မတရားဖမ်းဆီးနည်းပါးလာထက် 33% တစ်ခုစွဲတူသောအပြုအမူနှင့်အတူကြွက်အများဆုံးဖြစ်နိုင်သောကြိမ်နှုန်းကန့်သတ်မယ့်မြို့ပတ်ရထားစာရင်းအင်းနည်းလမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။ အထူးသတစ်ဦးချင်းဒီစံနှုန်း၎င်း၏ရမှတ် 66 အထက်တွင်ခဲ့လျှင်တိကျတဲ့စွဲတူသောစံ (ဥပမာစံ PR စနစ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထဲမှာကိုကင်းအဘို့အကာမွငျ့မား breakpoints အား) တင်ဆက်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်th အဆိုပါဖြန့်ဖြူး၏ရာခိုင်နှုန်း။ သိသာထင်ရှားတဲ့ဖော်ထုတ်ခြင်း၏ထိုကဲ့သို့သောအကြိမ်ရေ-မှီခိုနည်းလမ်းကိုစွဲတူသောအပြုအမူသာ 33% ၏ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားအကျယ်ချဲ့ကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူ, ကြွက်များ၏လူနည်းစုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုအစပိုင်းမှာ presupposes ။ အခြားအအကြိမ်ရေ-မှီခိုစံထည့်သွင်းခြင်းသာထပ်မံရွေးကောက်တော်မူသောစံများအကြားရာထူးဆက်စပ်မှု၏ဒီဂရီမှအချိုးအစား၌ဤအကြိမ်ရေလျော့နိုင်ပါတယ်။ လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာထို့ကြောင့်ဤနည်းလမ်းသာထို့အပြင်ကဲ့သို့သောအပြုအမူနှင့်အတူအနည်းငယ်ကြွက်ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီဇိုင်းအားဖြင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားရလဒ်ကိုဘို့ခွင့်ပြုလို့မရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျဒဏ်ခံသို့မဟုတ်စွဲလမ်းကဲ့သို့သောအပြုအမူအားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းကြွက်၏ကြိမ်နှုန်းတိုင်းတာအတွက်၎င်း၏တရားဝင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများပေါ်ပေါက်။ ဆနျ့ကငျြ, ဒီမှာထောက်ခံရွေးချယ်ရေး၏ရွေးချယ်မှု-based နည်းလမ်းကင်း- သာ. နှစ်သက်ကြွက်အများဆုံးဖြစ်နိုင်သောကြိမ်နှုန်းဖို့ကန့်သတ်မတရားဖမ်းဆီးသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်ကြိုတင်မထားဘူး။ မူအရ, ဒီကြိမ်နှုန်း 100% မှီနိုင်ဘူး။ အဆိုပါလေ့လာတွေ့ရှိအများဆုံးအကြိမ်ရေများများနိမ့်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို (ဆိုလိုသည်မှာ ~15%) ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျသရုပ်ပြထက် presuppose နိုင်ကြောင်းကိုကင်းစွဲသာဒဏ်ခံသူတွေကိုတစ်ပင်လယ်အကြားတစ်ဦးချင်းစီ၏လူနည်းစုသာသက်ရောက်သည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးအတိုင်းအတာများရှုထောငျ့မှ, ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုကင်းစွဲများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆန်ခါအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကဒဏ်ခံကြွက်များ၏အများစုထွက်ပေါင်းပင်များနှင့်သာအလားအလာကင်းစွဲသောအနည်းငယ်ကြွက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်မယ်လို့ ။ ရွေးချယ်ရေး၏ဤရွေးချယ်မှု-based နည်းလမ်းများ၏တရားဝင်မှု၏ထောက်ခံမှုအတွက်လူသားများအတွက်မကြာသေးမီဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုကိုကင်းနှင့်ငွေအကြားရွေးချယ်မှုပေးသောအခါ, မှီခိုတစ် DSM-based ရောဂါနှင့်အတူကင်းသည်အသုံးပြုသူများကိုပိုမိုမကြာခဏ Non-စွဲရှည်လျားထက်ကိုကင်းကိုရွေးချယ်ကြောင်းပြသ မသက်ဆိုင်ရရှိနိုင်ပိုက်ဆံပမာဏကို၏, ကင်းအသုံးပြုသူများအ -term .
ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်အနာဂတ်သုတေသနအတွက်အများအပြားအလားအလာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပထမဦးစွာဆေးစွဲ၏ neurobiology အပေါ်ယခင်သုတေသနဒဏ်ခံကြောင်းအများစုထံမှစွဲမှအားနည်းချက်ကြောင်းလူနည်းစုကိုသုံးပါကျယ်ပြန့်ကိုကင်းနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များအကြားခွဲခြားမရ ။ ရလဒ်အဖြစ်ကျယ်ပြန့်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအနက်ကိုဘော်ပြရန်ခက်ခဲဖြစ်ကြပြီးကိုကင်းစွဲ၏ neurobiology ဘို့မိမိတို့အရေးပါမှုကိုမသေချာမရေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒဏ်ခံတိရိစ္ဆာန်များကြီးမားတဲ့အများစုကိုယ်စားပြုပေါ်လာကတည်းကတကယ်တော့, ဤဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအများတို့သည်လည်းတ္ထုမှထပ်ခါတလဲလဲကိုကင်းသုံးစွဲမှုအဓိကနှင့်ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံစွဲ၏ neurobiological ဆက်စပ်မှုမဟုတ်ဘဲအခြားဖြစ်ကောင်းပုံမှန်, neuroplastic အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ကိုယ်စားပြုမဖွယ်ရှိသည် ။ အနာဂတ် neurobiological သုတေသန၌ဤအရေးကြီးသောပြဿနာရှင်းလင်းဖို့တလမ်းတည်းဖြင့်စနစ်တကျဒဏ်ခံအများစုနှင့်အတူအားနည်းချက်ကြွက်များ၏လူနည်းစုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်နှိုငျးယှဉျဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုသို့သောနှိုင်းယှဉ်အမှန်ပင်ကိုကင်းစွဲအခြေခံမှတွေးဆသော neurobiological အလုပ်မဖြစ်သို့မကြုံစဖူးထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်ဘူး။ ဒုတိယအချက်မှာလက်ရှိတွေ့ရှိချက်၏အခြားဆက်စပ်ဆိုလိုကင်းစွဲကုသရန်ဆေးဝါးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး preclinical မော်ဒယ်များသူတို့ရဲ့ဆက်စပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အများကြီးမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အကတိတော်များရှိနေသော်လည်းမူးယစ်ဆေးစွဲ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအပေါ်စမ်းသပ်သုတေသနယခုအချိန်အထိတစ်ခုသာကျိုးနွံ Translational သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာသုတေသနအများကြီးအလားအလာ pharmacological ပစ်မှတ်ပေမယ်ကိုကင်းစွဲအဘို့အဘယ်သူမျှမထိရောက်သောကုသမှုဖော်ထုတ် ။ ထို့ကြောင့်ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းစွဲများအတွက်ဆေးဝါးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် preclinical Self-အုပ်ချုပ်ရေးမော်ဒယ်များ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တရားဝင်မှုတိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်တွင်ကင်းကြိုက်တတ်တဲ့ကြောင့်ကြွက်များ၏သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအစုထဲမှာကိုကင်းရွေးချယ်မှုလျော့ချဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်များအတွက်ဆေးဝါးများပြပိုကောင်းကင်း-စွဲသောလူသားမြား၌မိမိတို့ကုထုံးထိရောက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းပေမည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏မူလရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုမှာ discrete-စမ်းသပ်မှုတွေရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်ခန့်မှန်းခြေအဖြစ်ဂန္ PR စနစ်အချိန်ဇယားကိုသုံးပြီး, ကိုကင်းများ၏အားနည်းတန်ဖိုးကိုအတည်ပြုဖို့ဖြစ်တယ်။ ဝိရောဓိကျနော်တို့အများဆုံးကြွက်များအကြီးအကျယ်သွေးကြောသွင်းကင်းကျော်ချိုမြိန်ရေပိုနှစ်သက်သော်လည်း, သူတို့သည်သို့ရာတွင်ယခင်ထက်အဆုံးစွန်သောရရှိရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်သောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အပေါ်ယံ, ဒီရလဒ်ကို (ဆိုလိုသည်မှာဘာသာရပ်များသူတို့လွတ်လပ်သောအကဲဖြတ်အတွက်လျော့နည်းတန်ဖိုးထားသောစီးပွားရေး option ကိုကြိုက်တတ်တဲ့) လူသားများတွင်စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချသုတေသနအတွက်ကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင် "preference ကိုမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်" ဖြစ်ရပ်ဆန်းပြန်ပြောပြသည် ။ အပိုဆောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးသို့သော်ဒီအသိသာဝိရောဓိကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ PR စနစ်အချိန်ဇယားတစ်ခုရွေးချယ်ဘက်လိုက်မှုကနေရလဒ်များကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကိုကင်းများ၏စီစဉ်ထိုး၏အကျိုးကိုတန်ဖိုးနှင့်အလုပ် output ကိုသို့မဟုတ်အားထုတ်မှုထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ကိုကင်းစုဆောင်းခြင်း၏တိုက်ရိုက်လှုံ့ဆော်အကျိုးသက်ရောက်မှုသာဒီဆုလာဘ်၏တန်ဖိုးအပေါ်မူတည်ထားတဲ့ချိုမြိန်ရေ breakpoints အားဆန့်ကျင်, ကိုကင်းများ၏ breakpoints အားနှစ်ခုလွတ်လပ်သောသက်ရောက်မှုအပေါ်မူတည် , ။ ကိုကင်း၏အဆုံးစွန်သော, တန်ဖိုးလွတ်လပ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတင်းအဓမ္မလှပတဲ့စမ်းသပ်မှုတွေကိုကင်းစုဆောင်းခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်လျော့ချသောအခါ, ကိုကင်းများ၏ breakpoints အားသိသိသာသာ, မျောက်အတွက်ယခင်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီသောတွေ့ရှိချက်လျော့ကျ , ။ အရေးကြီးတာက, ချိုမြိန်ရေမှဝင်ရောက်ခွင့်ခြားခြင်းမရှိအလားတူသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကိုကင်းများ၏ breakpoints အား, စံ PR စနစ်အချိန်ဇယားကိုတိုင်းတာအဖြစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အတူသရုပ်ကွာဟမှုရှင်းပြသောကိုကင်း၏တန်ဖိုးတစ်ဦးကတဖက်သတ်ပိုမိုမှန်းဆပေးပါသည်။ နောက်ထပ်သုတေသနအချက်ကိုခိုင်လုံကြောင်းခန့်မှန်း - ဒါဟာပိုပြီး space PR စနစ်စမ်းသပ်မှုတွေ (ဆိုလိုသည်မှာ 10 မိထက် သာ. ကြီးမြတ်) ဖြင့်, ကင်း၏ breakpoints အားချိုမြိန်ရေကြောင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလျော့နည်းသွားနိုင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်အညီအမျှသို့မဟုတ် ပို. ပင်စွဲလမ်းသောလူသားမြားအတွက်ကိုကင်းထက်နေသော; ဒါကရွေးချယ်ဘက်လိုက်မှုကင်း၏ breakpoints အားယေဘုယျအားဖြင့်အခြား Non-လှုံ့ဆော်ဆေးထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းလည်းကရှင်းပြသည် (နီကိုတင်းဥပမာဘိန်းဖြူ) -။ ထို့ကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်စမ်းသပ်မှုစီးရီးများက မကျေနပ်၍ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသောစံချိန်စံညွှန်းမီ PR အချိန်ဇယားသည်ကိုကင်း၏မျက်နှာသာပေးမှုကို ရွေးချယ်၍ ဘက်လိုက်ပြီးယင်း၏နှိုင်းယှဉ်တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ရန်ရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထက်မသင့်တော်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူဤနေရာတွင်ဖော်ပြရန်မှာပုံမှန် PR စနစ်တွင်ရရှိသောအလွန်ကိုကိုး breakpoints များ၌ကိုကင်း၏လှုံ့ဆော်မှုဂုဏ်သတ္တိများ၏အရေးပါမှုကိုဤလေ့လာမှုကပြသထားသော်လည်းလူသားများသည်အလားတူမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဖြင့်အလားတူမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုကိုယ်တိုင်စီမံသည်။ အဆက်ဆက်ဆေးများအကြား။ ထို့ကြောင့်အချို့သောသုတေသနမေးခွန်းများအတွက်ကြွက်များတွင်မိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်မှုကြားကာလကိုတိုတောင်းရန်လေ့လာခြင်းသည်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိခြင်းသည်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်ခုလုံးကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, များစွာသောအားသာချက်များရှိနေသော်လည်းမူးယစ်ဆေးစွဲမှအားနည်းချက်သို့မဟုတ်ဒဏ်ခံဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးချင်းစီ၏မှတ်ပုံတင်များ၏ရွေးချယ်မှု-based နည်းလမ်းလည်းအချို့သောအလားအလာန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အရေးကြီးဆုံးန့်အသတ်တစ်ဦးတည်းမူးယစ်ဆေး preference ကို၏မရှိခြင်းအမြဲကင်းစွဲထုတ်အာဏာရများအတွက်လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားမဟုတ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, polysubstance စွဲ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်တဦးတည်းပစ္စည်းဥစ္စာဘို့အ preference ကိုအခြားပစ္စည်းဥစ္စာမှစွဲလမ်းထွက်မအုပ်စိုးမထားဘူး။ ဒါဟာမျှသာတဦးတည်းစွဲအခြားထက်တန်ခိုးကြီးကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကြွက်, ချိုမြိန်ရေနှင့်ကင်းနှစ်ဦးစလုံးစွဲခံရဖို့ဖြစ်ပျက်လျှင်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ, ထို့နောက်ချိုမြိန် preference ကိုချိုမြိန်ရေမှစွဲကင်းစွဲထက်တန်ခိုးကြီးကြောင်းကိုသာညွှန်ပြလိမ့်မယ်။ သို့သော်တိရစ္ဆာန်များနှင့်လူသားနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အစားအစာနှင့်သကြားစွဲလမ်းများအတွက်ကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိသော်လည်း -ချိုရေနှင့်ကင်းမှ Co-စွဲဒီနေရာမှာအစီရင်ခံကင်းရွေးချယ်မှုပုံစံကိုရှင်းပြဖို့အလားအလာမရှိပါ။ ယခင်လေ့လာမှုများတွင်ကျယ်ပြန့်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူကြွက်နှစ်ခုသာရက်အတွင်းချိုမြိန်ရေ၎င်းတို့၏ preference ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ချိုမြိန်ရေ5ml ထက်လျော့နည်းသောက်ပြီးမှ ။ ဒါဟာအများဆုံးကြွက်ဒါလျှင်မြန်စွာချိုမြိန်ရေစွဲဖြစ်လာနှင့်စားသုံးမှု၏ထိုကဲ့သို့သောအနိမ့်အဆင့်ကိုအောက်ပါနိုင်ကြောင်းအလွန်မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။ ထို့ပြင်လူသားများအတွက်မကြာသေးမီကခန့်မှန်းချက်အစားအသောက်စွဲလမ်း, ကိုကင်းစွဲကဲ့သို့သာလူများ၏လူနည်းစုအကျိုးသက်ရောက်စေမယ်လို့အကြံပြု ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့နှင့်ပိုပြီးယေဘုယျအားဖြင့်, တယောက်တည်းသောသူ preference ကိုဖြစ်ကောင်းလည်းစွဲနေတဲ့ပြည်နယ် inferring များအတွက်လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားမဟုတ်ကြောင်းပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်ပြန်ဆိုအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပေမည်။ အဘယ်အရာကိုလည်းရေတွက်အခွင့်အလမ်းစရိတ်များတစ်ခုသို့မဟုတ် preference ကိုနဲ့ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များဖြစ်ပါသည်။ တဦးတည်းအမျိုးသမီးကြွက်စနစ်တကျကင်းကိုကျော်သူတို့ရဲ့ခွေးများကြိုက်တတ်တဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြလျှင်ဥပမာ,, တဦးတည်းမှန်ကန်စွာစွဲထင်ဟပ်အတိုင်းဤ preference ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ခွေးများများအတွက်မိခင် preference ကိုအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ပုံမှန်, မျှော်လင့်ထားအပြုအမူသည်နှင့်ကင်းအသုံးပြုမှုများ၏ဆက်စပ်မှုတို့ဖြင်အဓိကကုန်ကျစရိတ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဆနျ့ကငျြသို့သော်အနည်းငယ်ကအမျိုးသမီးကြွက်ထို့နောက်တဦးတည်းစွဲတူသောအပြုအမူများအတွက်ဖြစ်နိုင်သောအထောက်အထားများကိုကဲ့သို့သော preference ကိုအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးမည်ဖြစ်ကြောင်း, အသက်သာချောင်ချိရေးနှင့် / သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ခွေးများ၏ရှင်သန်မှု၏အကြိုးပကင်းပိုမိုနှစ်သက်ပါလျှင် -။ ကဇီဝဗေဒကြံ့ခိုင်ရေးအတွက်လျှော့ချရေးမှဦးဆောင်အဖြစ်အမှန်စင်စစ်ဤကိစ္စတွင်အတွက်အခွင့်အလမ်းကုန်ကျစရိတ်အတော်လေးပြင်းထန်သည်။ ဒါကြောင့်ကြွက်ငတ်မွတ်ခြင်းနှင့်ကယ်လိုရီသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်သက်သာရာနိုင်ကြောင်းသဘာဝသကြားဓာတ် (ဆိုလိုသည်မှာ, sucrose) ကိုကမ်းလှမ်းလျှင်ပင်ဆက်ရှိနေအဖြစ်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ, ကိုကင်းဘို့ preference ကိုလျှော့သက်သာချောင်ချိရေးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ မြင့်မားသောလောင်းကြေး၏မျက်နှာကိုအတွက်ကင်း preference ကို၏ဇွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်စွဲလမ်းတစ်ပြည်နယ်အကြံပြုထားသည်။
အားလုံးစမ်းသပ်ချက်အက်ဥပဒေ, 1986 ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ [ဗြိတိန်တိရစ္ဆာန်များ (သိပ္ပံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ) ထွက်သယ်ဆောင်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, နှင့်ဆက်စပ်လမ်းညွှန်ချက်များ, ဥရောပ Communities ကောင်စီညွှန်ကြားချက် (86 / 609 / EEC, 24 နိုဝင်ဘာလ 1986) နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များ၏အသုံးပြုမှုကိုရည်မှတ်ပြင်သစ်ညွှန်ကြားချက် (87-848, 19 အောက်တိုဘာလ 1987 décret)] ။ အားလုံးစမ်းသပ်ချက်ဟာကုသရေးန်ဆောင်မှုများ Gironde, သဘောတူညီချက်အရေအတွက်က B-33-063-5, 13 ဇွန်လ 2006 ၏ကော်မတီကအတည်ပြုပြီ။
ရင်တော့မှားမယ်, ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (2 လနှင့်စမ်းသပ်ချက်ရဲ့အစမှာအဟောင်းတစ်နှစ်ခွဲ), ​​အထီး, Wistar ကြွက် (n = ၈၃၊ ပြင်သစ်၊ Charles River သည်လက်ရှိလေ့လာမှုကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ ကြွက်များကိုနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုအုပ်စုများတွင်ထားရှိပြီးအလင်း - (၁၂ နာရီနောက်ပြန်အလင်း - မှောင်မိုက်သံသရာ) နှင့်အပူချိန်ထိန်းချုပ်ထားသောဗိုင်ဗာရီယမ် (၂၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) တွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အားလုံးအပြုအမူစမ်းသပ်ခြင်းအလင်း - မှောင်မိုက်သံသရာ၏မှောင်မိုက်အဆင့်စဉ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမှ လွဲ၍ အစားအစာနှင့်ရေကိုအိမ်အိတ်များတွင်အခမဲ့ရရှိနိုင်သည်။ အစားအစာတွင်ပုံမှန်ကြွက် Chow A83 (SAFE၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာတိရိစ္ဆာန်အစာနှင့်အင်ဂျင်နီယာ၊ သြဂတ်၊ ပြင်သစ်) တို့ပါဝင်သည်။ ၆၀% သောဘိုဟိုက်ဒရိတ် (အဓိကအားဖြင့်ပြောင်းဖူးဓာတ်)၊ ပရိုတင်း ၁၆%၊ ၁၂% ရေ၊ သတ္တုဓာတ် ၅%၊ အဆီနှင့် cellulose ၏ 12% ။ ဒြပ်သို့မဟုတ်သန့်စင်ပြီးသကြားထည့်သွင်းခဲ့သည်။
တကျိပ်နှစ်ပါးတူညီအော်ပရေတာအခန်းများ (30 × 40 × 36 စင်တီမီတာ) အားလုံးအမူအကျင့်သင်တန်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း (Imétronic, ပြင်သစ်) အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အားလုံးအခန်းများကွာမွဲမွံခွငျး lit ခန်းထဲမှာကိုလိုနီအခန်းတစ်ခန်းထဲကနေတည်ရှိသောခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီသည်အသံ-ကို attenuation နှင့်လေဝင်လေထွက်များအတွက်အိပ်ဇောပန်ကာတစ်ခုအဖြူဆူညံသံစပီကာ (45 ±6dB) တပ်ဆင်ထားသစ်သား cubicles အတွက်ပူးတွဲခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းထဲသို့ပြောင်းဖူး sawdust င်တစ်ဦးဖြုတ်ဗန်းထဲမှာစွန့်ပစ်စုဆောင်းခြင်းခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ stainless-သံမဏိဇယားကွက်ကြမ်းပြင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းထဲသို့နှစ်ခုညာဘက်ဒီလိုပါပဲ operating ပြားများနှင့်လက်ဝဲဘက်နှစ်ဖက်ကို၎င်း, နောက်ဘက်နှင့်အရှေ့ဘက်နှစ်ဖက်ပေါ်နှစ်ခုရှင်းရှင်းလင်းလင်း Plexiglas နံရံများ (ရှေ့ဘက်အခနျးမြား၏အဝင် / အထွက်ပေါက်မှကိုက်ညီ) ၏ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအော်ပရေတာ panel ကိုတစ်ဦးအလိုအလြောကျ-ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်လီဗာပါရှိသောဇယားကွက်အထက် midline နှင့်7စင်တီမီတာအပေါ်တပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ဝဲအော်ပရေတာ panel ကိုလည်းဇယားကွက်အထက်လီဗာနှင့် 9.5 စင်တီမီတာ၏လက်ဝဲဘက်တစ်ဦးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်, ဆလင်ဒါ-shaped အရက်သောက်မျိုးတွင်,6စင်တီမီတာတပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ တစ်ဦးက lickometer circuit ကိုလျက်ကြ၏စောင့်ကြည့်မှုများနှင့်အသံဖမ်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ တစ်ဦးကအဖြူရောင်အလင်း diode (1.2 စင်တီမီတာ OD) (ပု diode ၏ဗဟိုမှ) တစ်ဦးချင်းစီလီဗာအထက်တွင် 8.51cm တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းထဲသို့လည်း cubicle ၏ထိပ်ပေါ်တွင်ပြင်ပတွင်ထားရှိနှစ်ခုပြွတ်ပန့်များနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးခဲ့သည်။ တဦးတည်းပြွတ်စုပ်စက်တစ် silastic Tube (Dow Corning ကော်ပိုရေးရှင်း, မစ်ရှီဂန်, USA) မှတဆင့်သောက်သုံးရေမျိုးတွင်သို့ saccharin ဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူဒူလက်ဝဲလီဗာနှင့်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ရေအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်။ အခြားစုပ်စက်လက်ျာလီဗာကထိန်းချုပ်ထားပြီး cannula connector ကို (ပလတ်စတစ်တစ်ခုမှာ, ရော့, VA သို့တစ် Single-ရုပ်သံလိုင်းအရည်ဆုံလည် (Lomir ပြီးတော့ biomedical Inc ။ , ကွိဘက်, ကနေဒါ) ကနေတဆင့်တစ်ဦး Tygon Tube (ကိုးလ် Parmer) ချိတ်ဆက်မှတဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြေရှင်းချက်ကိုအပ်ခဲ့သည် ) တိရစ္ဆာန်၏နောက်ကျောအပေါ်။ အဆိုပါ Tygon ပြွန်တစ် stainless-သံမဏိနွေဦး (0.3 စင်တီမီတာ ID ကို, 0.5 စင်တီမီတာ OD) ကဆုံလည် tethering connector ကိုကနေအခနျး၏ဗဟိုမှာဆိုင်းငံ့ခဲ့သည့် (Aquitaine Ressort, ပြင်သစ်) ဖြင့်ကာကွယ်ထားခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်၏ဒေါင်လိုက်လှုပ်ရှားမှုများကိုတစ် counterbalancing အလေးချိန်-စက်သီး device ကိုအားဖွငျ့အဘို့အလျော်ကြေးငွေပေးခဲ့သည်။
ထုံဆေးကြွက် [chloral ဓါတ်ကိုပြန်လည်သို့မဟုတ် xylazine အရောအနှော (500 / ကီလိုဂရမ်, ip, JT Baker ကအဆိုပါနယ်သာလန် mg) နှင့် ketamine (15 / ကီလိုဂရမ်, ip, Merial, ပြင်သစ် mg) (110 / ကီလိုဂရမ်, ip, Bayer Pharma ဆေးဝါး, ပြင်သစ် MG )] ခွဲစိတ်သည့် scapulae အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော2စင်တီမီတာအကြောင်းကိုနောက်ကျောအလယ်၌အရေပြားမထွက်ကြောင်း, လက်ျာ jugular သွေးကြောထဲမှာ silastic ပြွန် (Dow Corning ကော်ပိုရေးရှင်း, မစ်ရှီဂန်, အမေရိကန်နိုင်ငံ) နဲ့ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ပြွန် heparinized ဆား (0.15 IU သည် / ml) (Sanofi-Synthelabo, ပြင်သစ်) နှင့် ampicilline (Panpharma, ပြင်သစ်) င်တစ်ဦးမြုံပဋိဇီဝဆေးဖြေရှင်းချက်၏ 280 ml နှင့်အတူနေ့စဉ်မှုများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးပြွန်ယိုစိမ့်သံသယခံခဲ့ရသောအခါ, ပြွန်များ၏ patency etomidate တစ်ခုသွေးကြောသွင်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့် check လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်, တိုတောင်းတဲ့-သရုပ်ဆောင် Non-barbiturate ထုံဆေး (1 / ကီလိုဂရမ်, Braun ဆေးပညာ, ပြင်သစ် mg) ။ အမူအကျင့်စမ်းသပ်ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် 7-10 ရက်ပေါင်းစတင်ခဲ့သည်။
Operant- နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရင်တော့မှားမယ်ကြွက်, အစားထိုးနေ့စဉ်အစည်းအဝေးများအပေါ် saccharin နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုတစ် fixed-အချိုး 1 (FR1) အချိန်ဇယားအောက်တွင်ခြောက်ရက်ပတ်လုံးတစ်ပါတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ saccharin အစည်းအဝေးများတွင်, saccharin နှင့်အတူဆက်စပ်လီဗာအဲဒီ session စတင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်နှင့် saccharin ရရှိနိုင်မှုအချက်တိုးချဲ့ခဲ့သည်; အခြားလီဗာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်နျြရစျ။ အဆိုပါတိုးချဲ့လီဗာပေါ်နှိပ်တစ်ခုမှာလီဗာကပ်လျက်အရက်သောက်ဖလား၌အပျတျောမူဆိုဒီယမ် saccharin ၏ 20% နှင့်အတူဒူရေတစ် 0.2-s ကိုလက်လှမ်းတို့ကဆုခခြံနှင့် cue-အလင်း၏ illumination အားဖြင့်အချက်ပြနေတဲ့ concomitant 20-s ကိုအချိန်ထွက်ကာလအစပျိုးခဲ့သည် အဆိုပါလီဗာအထက်။ အချိန်ကိုထွက်ကာလအတွင်းအဘယ်သူမျှမစီစဉ်အကျိုးဆက်များခဲ့တုံ့ပြန်။ ပထမဦးဆုံးအ3s ကိုချိုမြိန်ရေစီ 20-s ကိုလက်လှမ်း၏, ထိုအရက်သောက်ခွက်ကိုချိုမြိန်ရေနှင့်အလိုအလျှောက်ဖြည့်သဖြင့်, လာမယ့် 17 s ကိုစဉ်အတွင်း, ချိုမြိန်ရေအပိုဆောင်း volumes ကိုမိမိဆန္ဒအလျောက်ကိုလျက် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 0.02 ml ကို 10 ကိုလျက်နှုန်း) ကဝယ်လိုအားအပေါ်ရရှိသောခဲ့ကြသည်။ 20 s ကိုချိုမြိန်ရေမှဝင်ရောက်ခွင့်၏တိုတောင်းတဲ့ access ကိုကြောင်းသတိပြုပါ။ ချိုမြိန်ရေအခမဲ့ access ကိုပေးသည်အခါ, ကြွက်မွတ်မပြေနိုင်သော (Magalie Lenoir နှင့် Serge Ahmed က, အတည်မပြုရသေးသောလေ့လာတွေ့ရှိချက်) မရောက်မီ 20-30 မိနစ်အတွင်းမှာနီးပါးစဉ်ဆက်မပြတ်သောက်ရနိုငျသညျ။ ကိုကင်းအစည်းအဝေးများတွင်, ကိုကင်းနှင့်အတူဆက်စပ်လီဗာအဲဒီ session စတင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်နှင့်ကိုကင်းရရှိနိုင်မှုအချက်တိုးချဲ့ခဲ့သည်; saccharin နှင့်အတူဆက်စပ်လီဗာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်နျြရစျ။ အဆိုပါတိုးချဲ့လီဗာပေါ်နှိပ်တစ်ခုမှာလီဗာ 0.25 များထဲမှသွေးကြောသွင်းဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ဆုခခြံခဲ့ရ 0.15 s ကိုအပ် ml နှင့်လီဗာအထက် cue-အလင်း၏ illumination အားဖြင့်အချက်ပြနေတဲ့ concomitant 4-s ကိုအချိန်ထွက်ကာလအစပျိုး 20 တစ် volume ထဲမှာကိုကင်း MG ။ အချိန်ကိုထွက်ကာလအတွင်းအဘယ်သူမျှမစီစဉ်အကျိုးဆက်များခဲ့တုံ့ပြန်။ ကိုကင်း၏ဆေးထိုးကျယ်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သုတေသနအပါအဝင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ယခင်သုတေသနအတွက်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကြွက် 30 saccharin သို့မဟုတ်ကင်းဆုလာဘ်ဦးရေအများဆုံးရရှိခဲ့ဖူးသို့မဟုတ်3ဇကုနျလှနျခဲ့ပြီးမှအစည်းအဝေးများအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ FR အချိန်ဇယားသင်တန်းအပြီးတွင်ကြွက်တစ်ဦး linear တိုးတက်သော-အချိုး (PR စနစ်) အခြားနေ့စဉ်အစည်းအဝေးများအပေါ် saccharin သို့မဟုတ်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအချိန်ဇယား, ခြောက်ရက်ပတ်လုံးတစ်ပါတ်အောက်မှာစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အားလုံးစမ်းသပ်အခြေအနေများတုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက်သို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်အသီးအသီးချိုမြိန်သို့မဟုတ်ကင်းဆုလာဘ် (ဆိုလိုသည်မှာ 3, 1, 4,7... ) အောက်ပါ 10 တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ် increment အားဖြင့်အတွင်း-session တစ်ခုတိုးလာခဲ့ မှလွဲ. ပု FR အချိန်ဇယားများတွင်အသုံးပြုသူတို့အားတူညီခဲ့ကြသည်။ 30 မိပြီးနောက်ရပ်စဲ PR စနစ်အစည်းအဝေးများအကျိုးကိုမပါဘဲကြာခဲ့သည်သို့မဟုတ်4ဇကုနျလှနျခဲ့ခဲ့သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်၏တည်ငြိမ်ပြီးနောက် PR စနစ်အစည်းအဝေးများ (ဆိုလိုသည်မှာ 3% ကျော်) အများဆုံးကြွက်များအတွက် 90 ဇအတွင်းမပြောဘဲနေကြ၏။ အဆိုပါချိုးအမှတ်ကနောက်ဆုံးဖြည့်တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက်အဖြစ်သတ်မှတ်နှင့် PR စနစ် session တစ်ခုအတွင်းမှာရရှိခဲ့ဆုလာဘ်၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်စာအဆက်အသွယ်ခဲ့သည်။
ကြွက်များကိုကင်း (လီဗာကို C) ​​နှင့်တစ်ဦး discrete-စမ်းသပ်မှုတွေရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ် saccharin (လီဗာက S) နှင့်ဒူရေနှင့်ဆက်စပ်လီဗာနှင့်အတူဆက်စပ်လီဗာအကြားအတော်ကြာဆက်တိုက်နေ့စဉ်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်မှု session တစ်ခု 12 မိနစ်လှပတဲ့ 10 discrete စမ်းသပ်မှုတွေ၏ပါဝင်သည်, နှစ်ယောက်အဆက်ဆက်သည်ဆင့်, နမူနာ (4 စမ်းသပ်မှုတွေ) နှင့်ရှေးခယျြမှု (8 စမ်းသပ်မှုတွေ) သို့ပိုင်းခြားလေ၏။ နမူနာစဉ်အတွင်းစီတရားခွင်ကဒီအစားထိုးနိုင်ရန်အတွက်တဦးတည်းတစ်ခုတည်းလီဗာ၏တင်ပြချက်နှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီး: ကို C - S - ကို C - အက်စ်လီဗာကို C အနေနဲ့နောက်ဆုံးမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အရသာခြင်းကိုမနှစ်သက်အေးစက်သို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ဆနျ့ကငျြဘသက်ရောက်မှုကိုတားဆီးဖို့ပထမဦးဆုံးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ကြွက်ဟာရရှိနိုင်လီဗာအပေါ်5မိအတွင်းတုန့်ပြန်လျှင်, သူတို့သည်သက်ဆိုင်ရာဆုလာဘ် (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဆိုလိုသည်မှာ 0.25, 20% saccharin နှင့်အတူဒူရေမှကိုကင်းသွေးကြောသွင်းကယ်နှုတ်တော်မူ၏သို့မဟုတ် 0.2-s ကို access ကို mg) ကဆုခခြံခဲ့သညျ။ ဆုလာဘ်ပေးပို့သည့်လီဗာ၏ရုပ်သိမ်းမှုနှင့်ဤလီဗာအထက် cue-အလင်းတစ် 40-s ကို illumination အားဖြင့်အချက်ပြခဲ့သည်။ ကြွက်5မိအတွင်းတုံ့ပြန်ရန်ပျက်ကွက်လျှင်, လီဗာပြန်ရုပ်သိမ်းနှင့်မျှမ cue-အလင်းသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်ကိုအပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်နမူနာစဉ်အတွင်း, ကြွက်သီးခြားစီသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုမချခင်အသီးအသီးဆုလာဘ်အကဲဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ ရှေးခယျြမှုကာလအတွင်းဦးချင်းစီတရားခွင် S နှင့် C. သည်အထိနှစ်ခုခရိုနီတဦးကို select ခဲ့ရတယ်နှစ်ဦးစလုံးခရိုနီများ၏တပြိုင်နက်တည်းတင်ဆက်မှုနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ရှေးခယျြမှုစဉ်အတွင်းဆုလာဘ်ပေးပို့နှစ်ဦးစလုံးခရိုနီများ၏ရုပ်သိမ်းမှုနှင့်ရွေးချယ်ထားလီဗာအထက် cue-အလင်းတစ် 40-s ကို illumination အားဖြင့်အချက်ပြခဲ့သည်။ ကြွက်5မိအတွင်းတွင်ဖြစ်စေလီဗာအပေါ်တုံ့ပြန်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင်, နှစ်ဦးစလုံးခရိုနီပြန်ရုပ်သိမ်းနှင့်မျှမ cue-အလင်းသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်ကိုအပ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဆုလာဘ်များ၏တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက်နောက်ဆုံးမတော်တဆရွေးချယ်မှုရှောင်ရှားရန်ဆက်တိုက်တုံ့ပြန်မှု2ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက်များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုမပြုမီအခြားလီဗာအပေါ်တစ်ဦးကတုန့်ပြန်ပါကပြန်စပါ။ တုန့်ပြန်မှပြန်စခြင်းသည်သို့သော်အလွန်ခဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ကိုကင်းများ၏ဆွေမျိုးတန်ဖိုး quantitative အကဲဖြတ်: အကြား-session တစ်ခုပြဌာန်းခွင့်
preference ကို၏တည်ငြိမ် (ဆိုလိုသည်မှာမရှိ3ရက်ဆက်တိုက်ကျော်ခေတ်ရေစီးကြောင်းတိုးပွားလာသို့မဟုတ်လျော့ကျလာ) ပြီးနောက် saccharin နှင့်အတူဒူရေရရှိရန်လိုအပ်သောတုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်၏နံပါတ် - ဦးစားပေးဆုလာဘ် - တဖြည်းဖြည်း 1 ကြိမ်မှ 16 ထံမှအစည်းအဝေးများအကြားအဆတိုးခဲ့ကွောငျးကိုကင်းဘို့ရာ (ဆုလာဘ်နှုန်းဆိုလိုသည်မှာ2တုံ့ပြန်မှု) စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်2ဆုလာဘ်များအကြားလျစ်လျူ (သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တန်းတူရေး) ၏အမှတ်တိုင်းတာရန် preference ကိုတစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီထုတ်လုပ်ရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ကုန်ကျစရိတ်၏တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်မှာအနည်းဆုံး5ဆက်တိုက်အစည်းအဝေးများနှင့်ရှေးခယျြမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို၏တည်ငြိမ်သည်အထိစမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ အဆိုပါ2ဆုလာဘ်များအကြားလျစ်လျူ၏အချက်ပုံမှန် (ဆိုလိုသည်မှာသုံး-parameter သည်) sigmoid function ကို (အနည်းဆုံး-ရင်ပြင် Non-linear Regression, Sigmaplot 2002, ဗားရှင်း 8.02) နှင့်အတူ (အုပ်စုတစ်စု-ပျှမ်းမျှ) ကုန်ကျ-effect ကိုကွေးသငျ့အားဖြင့်ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ လျောက်ပတ်ကွေးဘို့, ဒေတာ 100% မှာအများဆုံးအစုံနှင့်အတူကင်းရွေးချယ်မှု၏ရာခိုင်နှုန်းအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ graphics, အလျစ်လျူအမှတ်တပ်ဆင်ကွေး 50% များ၏လျစ်လျူလိုင်းဖြတ်သန်းသွားသည်မှာအခြားရွေးချယ်စရာ၏ဆွေမျိုးကုန်ကျစရိတ်ဤသို့ကိုက်ညီ။
ကိုကင်းများ၏ဆွေမျိုးတန်ဖိုး quantitative အကဲဖြတ်: အတွင်း-session တစ်ခုပြဌာန်းခွင့်
preference ကို၏တည်ငြိမ်ပြီးနောက်ချိုမြိန်ရေဆွေမျိုးကုန်ကျစရိတ် - ထိုနှစ်သက်ဆုလာဘ် - တဖြည်းဖြည်းတိုင်း4ရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေတစ်ဦးအတွင်း-session တစ်ခုထုံးစံ၌တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအကြား-session ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအောက်ပါတူညီတဲ့ကြွက်များတွင်ကောက်ယူခဲ့သည့်ပထမဦးဆုံးအတွင်း-session တစ်ခုကုန်ကျစရိတ်-effect ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်, 16 discrete ရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေစုစုပေါင်းချိုမြိန်ရေကုန်ကျစရိတ်၏4အဆင့်ဆင့်မှသက်ဆိုင်ရာ, ရှိခဲ့သည်: 1, 4, 8 နှင့် ဒီနိုင်ရန်အတွက်ကင်း၏ 16 ကြိမ်ကုန်ကျစရိတ်။4discrete ရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထဲမှာရှိသကဲ့သို့အပေါငျးတို့သနောက်ဆက်တွဲအတွင်း-session တစ်ခုကုန်ကျစရိတ်-effect ကိုလေ့လာဆန်းစစ်ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီနေ့စဉ် session ကိုဆွေမျိုးကုန်ကျစရိတ်၏ 20 အဆင့်ဆင့်မှသက်ဆိုင်ရာ,5နမူနာစမ်းသပ်မှုတွေပါဝင်သည်: 1, 2, 4, 8 နှင့် 16 ဒီနိုင်ရန်အတွက်ကြိမ်ကင်း၏ကုန်ကျစရိတ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်စမ်းသပ်အခြေအနေများစံရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်သူတို့အားတူညီခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်ပြီး variable ကို (ဥပမာ saccharin အာရုံစူးစိုက်မှု) အတွက်, ကြွက်များကိုအနည်းဆုံး5ဆက်တိုက်အစည်းအဝေးများနှင့်အတွင်း-session တစ်ခုကုန်ကျစရိတ်-effect ကိုကွေး၏တည်ငြိမ်သည်အထိစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကင်းနဲ့ချိုမြိန်ရေကြားကလျစ်လျူ၏အချက်ကွေးလျောက်ပတ်များကခန့်မှန်းခဲ့သည်။
ကိုကင်း- သာ. နှစ်သက်တစ်ဦးချင်းစီ၏ကြိမ်နှုန်း၏နောက်ကြောင်းပြန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
အတိတ်5နှစ်တွေလွတ်လပ်သောအလိုက် 184 ပိုင် 13 ကြွက်တစ်ဦးစုစုပေါင်းအမူအကျင့်တည်ငြိမ်သည်အထိကအနည်းဆုံး5ဆက်တိုက်နေ့စဉ်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းအထက်တွင်ဖော်ပြထားရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးစီးခဲ့ရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေထက်ပို 3% နှင့်အတူ (ဆိုလိုသည်မှာ 50 ဆက်တိုက်အစည်းအဝေးများ [အတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည် အကွာအဝေး: 58% 100 ရန်, ပျမ်းမျှ: 100] နှင့် preference ကိုရမှတ်အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းလျော့ကျလာသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ခြင်းမရှိဘဲ; ကိုလည်းဒေတာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကြည့်ပါ) ။ ဤအကြွက်များအချို့ထံမှဒေတာကိုတခြားနေရာထုတ်ဝေခဲ့ကြသည် မဟုတျဘဲဤပုံစံ (ဆိုလိုသည်မှာလှိုင်း) အရမဟုတျဘဲအတိတ်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း၏ function ကိုအဖြစ်သော်လည်း။ ဤရွေ့ကားကြွက်မျှကြိုတင်ထိတွေ့မှုကနေကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှတိုးချဲ့ထိတွေ့မှုအထိရှေးခယျြမှုစမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသမိုင်း၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းများ၏ပမာဏကိုမီလီဂရမ် (သို့မဟုတ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်0မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) 486 မှ 1388 ထံမှအရွယ်ရှိနှင့်ပြင်းထန်မှု၏5အဆင့်ဆင့်သတ်မှတ်:0(n = 43), 1-75 (n = 66), 76-150 (n = 52), 151-225 (n = 10),> 226 မီလီဂရမ် (n = 13) ။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်းထန်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုစီတိုင်းအတွက် ၀ ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဦး စားပေးရမှတ်များအရရေကိုကြိုက်သည့်ကြွက်များ၏ကြိမ်နှုန်းကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်သည်။
ကိုကင်း Hydrochloride (သမဝါယမ Pharmaceutique Française, ပြင်သစ်) (500 ± 0.9 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) 21% NaCl ၏ 2-ml ကိုမြုံအိတ်အတွက်ဖျက်သိမ်းနှင့်အခန်းအပူချိန်မှာသိုထားခဲ့ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဆေးများဆား၏အလေးချိန်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဆိုဒီယမ် saccharin (Sigma-Aldrich, ပြင်သစ်) သို့မဟုတ် sucrose (Sigma-Aldrich, ပြင်သစ်) အခန်းအပူချိန်မှာကိုထိပုတ်ပါရေအတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည် (21 ±2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ။ ချိုမြိန်ဖြေရှင်းချက်နေ့ရက်တိုင်းသက်တမ်းတိုးခဲ့သည်။
saccharin (သို့မဟုတ် sucrose) နှင့်ကိုကင်းပါဝင်သောရေများအကြားလျစ်လျူရှုမှုပမာဏကိုကိုကရီ - စမ်းသပ်မှုရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်အဆင်ပြေသည်။ ၀ င်သောရမှတ်များမှရမှတ်များသည် nondrug အစားထိုးမှုကိုရွေးချယ်သည် (ဆိုလိုသည်မှာပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုများအနက်မှ ၅၀%) ကိုရွေးချယ်သည်။0အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရမှတ်များသည်ကိုကင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်သည် (ဆိုလိုသည်မှာပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုများ၏ ၅၀%) ။ PR အချိန်ဇယားတွင်ရမှတ်များသည် nondrug အစားထိုးနှင့်ကိုကင်းအကြားရှိ breakpoints များနှင့်ခြားနားသည်။ −0 နှင့် +50 အကြား PR ရမှတ် (ဆိုလိုသည်မှာ PR0 အချိန်ဇယားရှိအဆင့်တစ်ခု၏ခြားနားချက်နှင့်ကိုက်ညီမှု) ရှိသူများကိုဆုလာဘ်နှစ်မျိုးလုံးအတွက်ညီတူညီမျှအလုပ်လုပ်သည်ဟုမှတ်ယူကြသည်။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းများကို Stata, version 50 (Statsoft, Inc France) ကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့အိမ်စောင့်ရှောက်အကူအညီအတွက် data တွေကိုထုတ်ယူမှုနှင့် Alain Labarriere နဲ့သူ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ဘို့အန်း Fayoux နှင့် Stephane Lelgouach တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုအဘို့, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီအတွက် Pierre ၏ Gonzalez, အုပ်ချုပ်ရေးအကူအညီအတွက် Marie-ဟယ်လင်Bruyères, ခရစ်ယာန် Darrack ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်း DRs ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Sallouha Aidoudi, Karyn Guillem နဲ့ Kevin Freeman ကယခင်မူကြမ်းနှင့်ခွင်ပေါ်ကသူတို့မှတ်ချက်တွေပါ။ ယေဘုယျအားထောက်ခံမှုအဘို့ဘား Bioulac နဲ့ Michel Le Moal ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ကသူတို့စဉ်းစားဟန်နှင့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့မှတ်ချက်ဘို့နှစ်ခုအမည်မသိသုံးသပ်ရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း: ဤလုပ်ငန်းကို Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)၊ Université Victor-Segalen Bordeaux 2၊ Conseil Régional d'Aquitaine, National Research Agency (ANR), Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) မှထောက်ပံ့ငွေများဖြင့်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ နှင့် Mmin interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT) ။ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သူများသည်လေ့လာမှုပုံစံ၊ အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊
1 ။ Dackis, CA, ရွှေက MS ။ ကိုကင်းစွဲအတွက်နယူးသဘောတရားများ: အ dopamine တွေပျက်စီးမှုအယူအဆ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1985; 9: 469-477 ။ [PubMed]
2 ။ Gawin FH ။ ကိုကင်းစွဲ: စိတ်ပညာနှင့် neurophysiology ။ သိပ္ပံ။ 1991; 251: 1580-1586 ။ [PubMed]
3 ။ Redish အေဒီ။ ကော်လံကလွဲနေတယ်သွားပြီကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းစဉ်သည်အဖြစ်စွဲလမ်း။ သိပ္ပံ။ 2004; 306: 1944-1947 ။ [PubMed]
4 ။ ဗန် Dyck ကို C, Byck R. ကင်း။ သိပ္ပံနည်းကျအမေရိကန်။ 1982; 246: 128-141 ။ [PubMed]
5 ။ Volkow ND, ပညာရှိ RA ။ ဘယ်လိုမူးယစ်ဆေးစွဲကျွန်တော်တို့ကိုအဝလွန်ခြင်းကိုနားလည်ကူညီပေးနိုငျသနညျး နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 555-560 ။ [PubMed]
6 ။ dopamine-မှီခိုဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုရောဂါအဖြစ် di Chiara G. အမူးယစ်ဆေးစွဲ။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1999; 375: 13-30 ။ [PubMed]
7 ။ Davidson ES, Finch JF, Schenk အက်စ် variable ကိုကင်းဖို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှုအတွက်: ကောလိပ်ကျောင်းသားများကနဦးအတွေ့အကြုံများကို။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 1993; 18: 445-453 ။ [PubMed]
8 ။ Haertzen, CA, Kocher TR, Miyasato ကေစစ်ကူပထမဦးဆုံးမူးယစ်ဆေးအတွေ့အကြုံကနေနောက်ပိုင်းမှာမူးယစ်ဆေးအလေ့အထများကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်စွဲနိုင်သည်ကော်ဖီ, စီးကရက်, အရက်, barbiturates, အသေးစားနှင့်အဓိကပဿဒ္ဓိ, စိတ်ကြွဆေး, ဆေးခြောက်, hallucinogens, ဘိန်းဖြူ, opiates နှင့်အတူရလဒျမြားနှငျ့ ကိုကင်း။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1983; 11: 147-165 ။ [PubMed]
9 ။ လမ်းဘတ်မိုင်, McLeod က M, ကိုကင်းနှင့်အတူကနဦးအတွေ့အကြုံ Schenk အက်စ် Subject တုံ့ပြန်မှု: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီတစ်ခုတူးဖော်ရေး။ စွဲလမ်း။ 2006; 101: 713-725 ။ [PubMed]
10 ။ Sofuoglu M က, ဘရောင်းက S, Dudish-Poulsen S က, Hatsukami DK ။ လူသားတွေအတွက်သောက်သည်ကိုကင်းဖို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 2000; 26: 591-602 ။ [PubMed]
11 ။ စတိန်း RZ, Woicik PA ဆိုပြီး, Moeller SJ, Telang က F, ဂြနျေး M က, et al ။ like နှိပ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်တက်ကြွသောကိုကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက် Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များချို့တဲ့: အသိုင်းကြိုး-R မေးခွန်းလွှာ။ J ကို Psychopharmacol ။ 2010; 24: 257-266 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
12 ။ Volkow ND, et al ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Gatley SJ ။ ဦးနှောက် dopamine D2 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်အားဖြင့်လူမှာ psychostimulants မှတုံ့ပြန်မှုအားဖြည့်များ၏ခန့်မှန်းချက်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 156: 1440-1443 ။ [PubMed]
13 ။ Volkow ND, et al ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Thanos PP, Logan J ကို။ ပွားလေ့လာမှု: ဦးနှောက် DA D2 receptors လူသားများတွင်စိတ်ကြွဆေး၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ synapses ။ 2002; 46: 79-82 ။ [PubMed]
14 ။ Pickens R ကို, ကြွက်များတွင် Thompson က T. ကင်း-အားဖြည့်အပြုအမူ: အားဖြည့်ပြင်းအားနှင့်ပုံသေ-အချိုးအရွယ်အစားဆိုးကျိုးများ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1968; 161: 122-129 ။ [PubMed]
15 ။ Ahmed က SH ။ စွဲလမ်းများအတွက်အဓိကအန္တရာယ်အချက်: မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ရရှိနိုင်မှုအကြားချိန်ခွင်လျှာဘက်မညီ။ EUR J ကို Pharmacol ။ 2005; 526: 9-20 ။ [PubMed]
16 ။ Ahmed က SH ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် neuroscience Biobehav ဗြာ; 2010 ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက် validation အကျပ်အတည်း: မူးယစ်ဆေးစွဲဆီသို့ Non-disorders မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပြင်။ [PubMed]
17 ။ ရက်သတ္တပတ် JR ။ စမ်းသပ်မော်ဖင်းအကိုက်စွဲ: ထိန်းအကွပ်မရှိသောကြွက်များတွင်အလိုအလျောက်သွေးကြောသွင်းဆေးထိုးဘို့နည်းလမ်း။ သိပ္ပံ။ 1962; 138: 143-144 ။ [PubMed]
18 ။ Christensen CJ, Kohut SJ, handler က S, Silberberg တစ်ဦးက, Riley AL ။ Fischer နှင့် Lewis ကကြွက်များတွင်အစားအသောက်နှင့်ကိုကင်းဝယ်လိုအား။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2009; 123: 165-171 ။ [PubMed]
19 ။ Christensen CJ, Silberberg တစ်ဦးက, Hursh SR, Huntsberry ME, Riley AL ။ ကြွက်များတွင်ကင်းနှင့်အစားအစာ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတန်ဖိုးကို: ဝယ်လိုအား၏အဆမော်ဒယ်၏စမ်းသပ်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2008; 198: 221-229 ။ [PubMed]
20 ။ Christensen CJ, Silberberg တစ်ဦးက, Hursh SR, ရိုးမား PG, Riley AL ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကင်းနှင့်အစားအစာဝယ်လိုအား။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008; 91: 209-216 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21 ။ Lenoir M က, Serre က F, Cantin L ကို, Ahmed က SH ။ ပြင်းထန်သောချိုကိုကင်းဆုလာဘ်ထက်မလွန်။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2007; 2: e698 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ ME Carroll, လက်ခ် ST ။ ကြွက်များတွင်ဃကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး Autoshaping: ဝယ်ယူအပေါ် nondrug အခြားရွေးချယ်စရာစစ်ကူ၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 1993; 110: 5-12 ။ [PubMed]
23 ။ ME Carroll, လက်ခ် ST, Nygaard SL ။ တစ်ဦးကတစ်ပြိုင်နက်တည်းရရှိနိုင် nondrug စစ်ကူဝယ်ယူကာကွယ်ပေးသည်သို့မဟုတ်ကင်း-အားဖြည့်အပြုအမူများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလျော့နည်းစေပါသည်။ Psychopharmacology (Berl) 1989; 97: 23-29 ။ [PubMed]
24 ။ အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ထောငျခြော: လူ့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာကိုကင်း, ဆေးခြောက်များနှင့်ဘိန်းဖြူ Haney အမ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2009; 14: 9-21 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
25 ။ Nader, MA, Woolverton WL ။ တစ်ဦး discrete-စမ်းသပ်မှုတွေရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထဲမှာမူးယစ်ဆေးရွေးချယ်မှုတခုတခုအပေါ်မှာအခြားရွေးချယ်စရာစစ်ကူ၏ပြင်းအားတိုးပွားလာ၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 1991; 105: 169-174 ။ [PubMed]
26 ။ Higgins ST, Bickel wk, Hughes JR ။ လူ့ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတခုတခုအပေါ်မှာအခြားရွေးချယ်စရာစစ်ကူ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1994; 55: 179-187 ။ [PubMed]
27 ။ Spealman RD ။ အပြုအမူကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းများ၏အချိန်ဇယား၏ရပ်စဲခြင်းဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သိပ္ပံ။ 1979; 204: 1231-1233 ။ [PubMed]
28 ။ Vanderschuren LJ, Kalivas PW ။ အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်း induction နှင့်စကားရပ်ထဲမှာ dopaminergic နှင့် glutamatergic ဂီယာအတွက် ALTER: preclinical လေ့လာမှုများ၏အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်။ Psychopharmacology (Berl) 2000; 151: 99-120 ။ [PubMed]
29 ။ Ahmed က SH, Koob gf ။ အလယ်အလတ်ကနေအလွန်အကျွံမူးယစ်စားသုံးမှုမှအကူးအပြောင်း: hedonic set ကိုအမှတ်အတွက်ပြောင်းလဲမှု။ သိပ္ပံ။ 1998; 282: 298-300 ။ [PubMed]
30 ။ Paterson NE, Markou အေကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းပြီးနောက်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်းစားသုံးမှုများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်။ Neuroreport ။ 2003; 14: 2229-2232 ။ [PubMed]
31 ။ Vanderschuren LJ, Everitt BJ ။ မူးယစ်ဆေးရှာအချိန်ကြာမြင့်စွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဖြစ်လာသည်။ သိပ္ပံ။ 2004; 305: 1017-1019 ။ [PubMed]
32 ။ Epstein DH, Preston KL, Stewart က J ကို, Shaham Y. မူးယစ်ဆေး relapse တစ်မော်ဒယ်ခါနီး: အ reinstatement လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏တရားဝင်မှုတစ်ဦးအကဲဖြတ်။ Psychopharmacology (Berl) 2006; 189: 1-16 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
33 ။ Kalivas PW ။ စွဲလမ်းမှု၏အချိုမှု homeostasis ယူဆချက်။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2009; 10: 561-572 ။ [PubMed]
34 ။ Shalev ဦး, Grimm JW, relapse ၏ Shaham Y. Neurobiology ဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းရှာမှ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Pharmacol ဗျာ 2002; 54: 1-42 ။ [PubMed]
35 ။ Kippin TE, Fuchs RA, ကြည့်ရှု RE ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာကဆက်ပြောပါတယ်နှင့်ကြွက်များအတွက်ရှာကြံကိုကင်းများတိုးမြှင့် reinstatement မှ noncontingent ကင်းထိတွေ့ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ။ Psychopharmacology (Berl) 2006; 187: 60-67 ။ [PubMed]
36 ။ Knackstedt LA က, Kalivas PW ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှတိုးချဲ့ access ကိုမူးယစ်ဆေး-ရစေတယ် reinstatement သော်လည်းမအပြုအမူာင်းပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2007; 322: 1103-1109 ။ [PubMed]
37 ။ Mantsch JR, Yuferov V ကို, Mathieu-Kia လေး, ဟိုတစ်ဦးက, Kreek MJ ။ ကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင် reinstatement နှင့်ဦးနှောက် mRNA အဆင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်အနိမ့်ကိုကင်းဆေးများနှိုင်းယှဉ်မြင့်မားဖို့တိုးချဲ့သုံးစွဲနိုင်၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2004; 175: 26-36 ။ [PubMed]
38 ။ Ahmed က SH, compulsive ကိုကင်းသုံးစွဲမှုကနေ psychomotor အကဲဆတ်ခြင်း Cador အမ် Dissociation ။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31: 563-571 ။ [PubMed]
39 ။ Ahmed က SH ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏စက်လှေကား။ ခုနှစ်တွင်: Olmstead MC, အယ်ဒီတာ။ Neuromethods: မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏တိရိစ္ဆာန် & Models ။ Humana စာနယ်ဇင်း, စာနယ်ဇင်းများတွင် Inc ကို Vol; 2009 ။
40 ။ Hollard V ကို, Davison MC ။ သှေးကွဲပြားခြားနားသောစစ်ကူများအတွက် preference ။ J ကို Exp စအိုပြုမူနေ။ 1971; 16: 375-380 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
41 ။ Miller က HL ။ အဆိုပါခိုအတွက်ကိုက်ညီခြင်း-based hedonic လာခြင်း။ J ကို Exp စအိုပြုမူနေ။ 1976; 26: 335-347 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
42 ။ ဆုလာဘ်အစွမ်းသတ္တိ၏တစ်ဦးအတိုင်းအတာအဖြစ် Hodos ဒဗလျူတိုးတက်ရေးပါတီအချိုးအစား။ သိပ္ပံ။ 1961; 134: 943-944 ။ [PubMed]
43 ။ ရစ်ချတ်ဆန်ရော်ဘာ, ရောဘတ် DC က။ ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးလေ့လာမှုများအတွက်တိုးတက်ရေးပါတီအချိုးအချိန်ဇယား: ထိရောက်မှုအားဖြည့်အကဲဖြတ်ဖို့နည်းလမ်း။ J ကို neuroscience နည်းလမ်းများ။ 1996; 66: 1-11 ။ [PubMed]
44 ။ ဖြတ်: D, LeSage MG, Glowa JR ။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဖြန့်ဝေ၏တိုးတက်ရေးပါတီ-အချိုးအချိန်ဇယား: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Psychopharmacology (Berl) 1998; 139: 169-184 ။ [PubMed]
45. Russ BE, Cohen YE ။ Rhesus မျောက်များ၏အသံကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်သောလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အဘိုးပြတ်သည်။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2009; 4: e7834 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
46 ။ Mazur je ။ ရှေးခယျြမှု။ ခုနှစ်တွင်: Iverson ih, Lattal Ka, အယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါအမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံနည်းစနစ်: အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အပိုင်း 1 ။ အမ်စတာဒမ်: Elsevier သိပ္ပံထုတ်ဝေ BV; 1991 ။ စစ။ 219-250 ။
47 ။ Grimm JW, မျှော်လင့်ခြင်း BT, ပညာရှိ RA, Shaham Y. Neuroadaptation ။ ဆုတ်ခွာပြီးနောက်ကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွား။ သဘာဝ။ 2001; 412: 141-142 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
48 ။ ဘရောင်း, G, Stephens DN ။ တစ်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင်အီသနောသို့မဟုတ် sucrose များအတွက်တုံ့ပြန်အပေါ်ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုများ။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 2002; 13: 157-162 ။ [PubMed]
49 ။ Martelle JL, Czoty PW, Nader, MA ။ မျောက်တွေကိုအတွက်တိုးတက်သော-အချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင်အကဲဖြတ်ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအပေါ်အချိန်ထွက်ကြာချိန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 2008; 19: 743-746 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
50 ။ Poncelet M က, Chermat R ကို, Soubrie P ကိုရှိမုန် P. ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ psychomotor လှုံ့ဆော်လှုပ်ရှားမှုလေ့လာနေများအတွက်မော်ဒယ်အဖြစ်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယား။ Psychopharmacology (Berl) 1983; 80: 184-189 ။ [PubMed]
51 ။ စားသုံးမိအပြုအမူ၏ Sclafani အေ Post ကို-စားသုံးမိပါအပြုသဘောထိန်းချုပ်မှု။ အစာစားချင်စိတ်။ 2001; 36: 79-83 ။ [PubMed]
52 ။ ME Carroll, လက်ခ် ST ။ ဆေးထိုးတဲ့ function ကိုအဖြစ်ဃစိတ်ကြွဆေးနှင့်ကြွက်များအတွင်းကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသိမ်းယူမှု။ Psychopharmacology (Berl) 1997; 129: 206-214 ။ [PubMed]
53 ။ Elsmore TF, ဖလက်ချာ GV, Conrad DG, Sodetz FJ ။ စီးပွားရေးသတ်ခြင်းဖြင့်မြောကျမောငျးမမြိုးဘိန်းဖြူစားသုံးမှု၏လျှော့ချရေး။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1980; 13: 729-731 ။ [PubMed]
54 ။ Aigner TG, Balster RL ။ မျောက်တွေကိုအတွက်ရွေးချယ်မှုကိုအပြုအမူ: အစားအစာနှိုင်းယှဉ်ကင်း။ သိပ္ပံ။ 1978; 201: 534-535 ။ [PubMed]
55 ။ Fitch TE, ရောဘတ် DC က။ ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကာလအပေါ်ထိုးခြင်းနှင့် access ကိုကန့်သတ်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1993; 33: 119-128 ။ [PubMed]
56 ။ Ahmed က SH, Kenny PJ, Koob gf, မြင့်တက်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွယ် hedonic allostasis များအတွက် Markou အေ Neurobiological သက်သေအထောက်အထား။ နတ် neuroscience ။ 2002; 5: 625-626 ။ [PubMed]
57 ။ Negus အက်စ်အက်စ်။ မျောက်တွေကိုအတွက်ကိုကင်းနှင့်အစားအစာအကြားရွေးချယ်မှုလျင်မြန်စွာအကဲဖြတ်: D-စိတ်ကြွဆေးနှင့် flupenthixol နှင့်အတူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ကုသမှု၏ဆိုးကျိုးများ။ Neuropsychopharmacology ။ 2003; 28: 919-931 ။ [PubMed]
58 ။ Negus အက်စ်အက်စ်။ မျောက်တွေကိုအတွက်ကိုကင်းနှင့်အစားအစာအကြားရွေးချယ်မှုအပေါ်ပြစ်ဒဏ်၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2005; 181: 244-252 ။ [PubMed]
59 ။ အန်သိုနီ JC, Warner LA က, Kessler RC ။ နှိုင်းယှဉ်ဆေးရွက်ကြီးအပေါ်မှီခို၏ရောဂါ, အရက်, ထိန်းချုပ်ထားသောတ္ထုများနှင့်ရှူရှိုက်မိပါ: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Comorbidity စစ်တမ်းကနေအခြေခံတွေ့ရှိချက်။ စမ်းသပ်နှင့်လက်တွေ့ Psychopharmacology ။ 1994; 2: 224-268 ။
60 ။ Degenhardt L ကို, Bohnert KM, အန်သိုနီ JC ။ ကိုကင်းနှင့်အထွေထွေလူဦးရေအတွက်နဲ့အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးမှီခို၏အကဲဖြတ်: "ungated" ချဉ်းကပ်မှုသာရှိပြီးပြည်ပမှ "န့်သတ်ထားထားပြီး" ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2008; 93: 227-232 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
61 ။ Reboussin BA, အန်သိုနီ JC ။ တစ်ဦးကိုကင်းမှီခို syndrome ရောဂါကင်းအသုံးပြုမှုစတင်ခြင်းပြီးနောက်မကြာမီပေါ်ထွက်လာသောစိတ်ကူးကိုထောကျပံ့ဖို့ epidemiological သက်သေအထောက်အထားရှိပါသလား? Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31: 2055-2064 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
62 ရော်ဘင် LN ။ ဆဌမသောမတ်စ်ဂျိမ်းစ် Okey သတိရအောက်မေ့ပို့ချချက်။ ဗီယက်နမ်စစ်ပြန်များ၏ဘိန်းဖြူစွဲလမ်းမှုမှအလျင်အမြန်ပြန်လည်နာလန်ထူလာခြင်း၊ စွဲ။ 1993; 88: 1041-1054 ။ [PubMed]
63 ။ Robin ln, Davis က DH, Goodwin က DW ။ အမေရိကန်ကြည်းတပ်များကမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်ယောက်ျားဝင်ရောက်ခဲ့သည်: သူတို့ရဲ့ပြည်တော်ပြန်အပေါ်တစ်ဦးနောက်ဆက်တွဲ။ နံနက် J ကို Epidemiol ။ 1974; 99: 235-249 ။ [PubMed]
64. Voon V, Fernagut PO, Wickens J, Baunez C, Rodriguez M, et al ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါတွင်နာတာရှည် dopaminergic နှိုးဆွခြင်း - dyskinesias မှထိန်းချုပ်သည့်ရောဂါများအထိ။ Lancet Neurol ။ 2009; 8: 1140-1149 ။ [PubMed]
65. အီဗန် AH, Lees AJ ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိ Dopamine dysregulation syndrome ရောဂါ။ Curr ထင်မြင်ချက် Neurol ။ 2004; 17: 393-398 ။ [PubMed]
66 ။ Deroche-Gamonet V ကို, ဘီးလင်း: D, Piazza PV ။ ကြွက်များတွင်စွဲတူသောအပြုအမူများအတွက်အထောက်အထား။ သိပ္ပံ။ 2004; 305: 1014-1017 ။ [PubMed]
67 ။ ဘီးလင်း: D, Apr AC အ, Dalley JW, Robbins TW, Everitt BJ ။ အမြင့် Impulse compulsive ကင်း-ဆည်းပူးနေမှ switch သည်ခန့်မှန်းထားသည်။ သိပ္ပံ။ 2008; 320: 1352-1355 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
68 ။ Walsh SL, Donnie EC, Nuzzo PA ဆိုပြီး, Umbricht တစ်ဦးက, Bigelow GE ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုနဲ့လူ့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ pharmacodynamic တုံ့ပြန်မှု: ကင်းမှီခိုနှိုင်းယှဉ်ကင်းအလွဲသုံးစားမှု။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2010; 106: 28-37 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
69 ။ Koob gf, ကက်နက်လွိုက်, G, Mason ဆို BJ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲဘို့ pharmacotherapies ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး: တစ် Rosetta သောကျောက်ချဉ်းကပ်။ နတ်ဗြာမူးယစ်ဆေး Discover ။ 2009; 8: 500-515 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
70 ။ Tversky တစ်ဦးက, Kahneman ဃဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ဘောင်များနှင့်ရှေးခယျြမှု၏စိတ်ပညာ။ သိပ္ပံ။ 1981; 211: 453-458 ။ [PubMed]
71 ။ Woolverton WL, Ranaldi R ကို, et al ဝမ် Z ကို, Ordway GA တပေါလုသည် IA, ။ pharmacodynamic နှင့် pharmacokinetic ယန္တရားများ: တစ်ဝတ္ထု dopamine Transporter ligand ၏အစွမ်းသတ္တိကိုအားဖြည့်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2002; 303: 211-217 ။ [PubMed]
72 ။ အန်သိုနီ JC ။ မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ကူးစက်ရောဂါ။ ခုနှစ်တွင်: Davis က KL, Charney: D, ကွိုင်း JT, Nemeroff ကို C, အယ်ဒီတာများ။ Neuropsychopharmacology: တိုးတက်မှု၏ပဉ္စမမျိုးဆက်။ Philadelphia တွင်: Lippincott ဝီလျံနဲ့ Wilkins; 2002 ။ စစ။ 1557-1573 ။
73 ။ Hughes JR, Helzer je, Lindberg လုပ် SA ။ DSM / ICD-သတ်မှတ်ထားသောနီကိုတင်းမှီခို၏ပျံ့နှံ့။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2006; 85: 91-102 ။ [PubMed]
74 ။ Nutt D ကိုဘုရင် LA က, Saulsbury W ကတစ်ဆင်ခြင်တုံတရားစကေး၏ Blakemore C. ဖွံ့ဖြိုးရေးအလားအလာအလွဲသုံးစားလုပ်၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ရန်။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ။ 2007; 369: 1047-1053 ။ [PubMed]
75 ။ Avena မိုင်, Rada P ကို, Hoebel BG ။ သကြားစွဲလမ်းများအတွက်သက်သေအထောက်အထား: ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, အလွန်အကျွံသကြားစားသုံးမှု၏အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2008; 32: 20-39 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
76 ။ Gearhardt AN, Corbin WR, Brownell KD ။ အဆိုပါယေးလ်အစားအသောက်စွဲလမ်းမှုစကေး၏ပဏာမ validation ကို။ အစာစားချင်စိတ်။ 2009; 52: 430-436 ။ [PubMed]
77 ။ ရော်ဂျာ PJ, Smit HJ ။ စားနပ်ရိက္ခာတဏှာနှင့်အစာ "စွဲ": တစ် biopsychosocial ရှုထောင့်ကနေသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုအရေးပါပြန်လည်သုံးသပ်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2000; 66: 3-14 ။ [PubMed]
78 ။ Pelchat ML ။ လူသားတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာစွဲ။ J ကို Nutr ။ 2009; 139: 620-622 ။ [PubMed]
79 ။ Mattson BJ, ဝီလျံက S, Rosenblatt JS, Morrell JI ။ ယင်းကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလတစ်လျှောက်လုံးခွေးများနှင့်ကိုကင်းနှစ်ခုအပြုသဘောအားဖြည့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2001; 115: 683-694 ။ [PubMed]
80 ။ Mattson BJ, Williams ဟာအရှေ့တောင်, Rosenblatt JS, Morrell JI ။ cocaine- သို့မဟုတ် pup-ဆက်စပ်အခန်းများများအတွက် Preferences ကိုမဟုတ်ရင်အပြုအမူတူညီရွှေ့ဆိုင်မိခင်ကြွက်ခွဲခြား။ Psychopharmacology (Berl) 2003; 167: 1-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
81 ။ Seip KM, Pereira M က, Wansaw အမတ်, Reiss JI, Dziopa EI, et al ။ အမျိုးသမီးကြွက်များ၏ရွှေ့ဆိုင်ကာလတစ်လျှောက်ကိုကင်းများမက်လုံးပေး salience ။ Psychopharmacology (Berl) 2008; 199: 119-130 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]